BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 10/31/20120အကြံပြုခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြည်ပသို့ ပေးဆပ် ရန်ရှိသည့် ကြွေးမြီစုစုပေါင်းမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၁၅၀၀၀ကျော်(၁၅ ဘီလီယံကျော်)ရှိကြောင်း ဘဏ္ဍာရေးနှင့် အခွန်ဝန်ကြီးဌာနမှ ဒုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမောင်မောင်
ပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင် အောက်တိုဘာ ၂၄ ရက်က ဒုဝန် ကြီးက မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကြွေးမြီ တိုးရင်းစုစုပေါင်းမှာ ဒေါ်လာ၁၅၀၈၉ ဒသမ ၄၃၄ သန်းရှိကြောင်း လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးမောင်တိုး၏မေးခွန်းကို ဖြေကြား
စဉ် ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ဇန်န၀ါရီ ၃၁ ရက်က ကျင်းပခဲ့ သော အမျိုးသားလွှတ်တော်တွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ ပေးဆပ်ရန်ရှိသော ကန်ဒေါ်လာ ၁၁၀၂၃ ဒသမ ၂၈၉ သန်း (ဒေါ် လာ ၁၁ ဘီလီယံကျော်)ရှိကြောင်း ဘဏ္ဍာအခွန်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကဖြေကြားခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့် ပြည်ပသို့ ပေး ဆပ်ရမည့် ကြွေးမြီတိုးရင်း စုစု ပေါင်းမှာ ဆယ်လအတွင်း ဒေါ် လာသန်း ၄၀၀၀ ကျော် (၄ ဘီလီယံကျော်)တိုးလာခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် အစိုးရအနေဖြင့် ပြည်တွင်းကြွေးမြီ စုစုပေါင်း ကျပ် သန်းပေါင်း ၉ç၉၈၈ç၈၅၇ လည်း ပေးဆပ်ရန်ရှိသည်။
မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးတွင် ၂၀၁၂ စက်တင်ဘာလကုန်အထိ လည်ပတ်သုံးစွဲနေသော ငွေပမာဏစုစုပေါင်းမှာ ကျပ်သန်းပေါင်း ၆၁၉၉၁၂၂ ဒသမ ၉၅ (ကျပ်ငွေ၆ဒသမ၂ ထရီလီယံခန့်)ရှိကြောင်း ဒုဝန်ကြီးကပြောကြားသည်။ ဦးမောင်တိုး၏ မေးခွန်းတွင်ပါဝင်သော နိုင်ငံခြားအရန်ငွေနှင့် ရွှေတန်ဖိုးမည်မျှရှိကြောင်း မေးခွန်းကိုစိစစ်ဆောင်ရွက်ဆဲဖြစ်ပြီး သီးခြား
တင်ပြသွားမည်ဟု ဦးမောင်မောင်သိမ်းက ဖြေကြားခဲ့သည်။
၂၀၁၂ဇန်န၀ါရီအထိ တစ် နိုင်ငံလုံး လည်ပတ်သုံးစွဲငွေ ကျပ် ၅၆၀၀ဘီလျံ(၅ဒသမ၆ထရီလီယံ) ကျော်ရှိခဲ့သည်။ ထို့ ကြောင့် ကိုးလ၀န်းကျင်အတွင်း ၆၀၀ဘီလျံနီးပါး တိုးလာခြင်းလည်းဖြစ်သည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ဒုက္ခသည်များ အရေးပေါ်အကူအညီ လိုအပ်နေ
လတ်တလောဖြစ်ပွားနေသည့် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်း မတည်ငြိမ်မှု များကြောင့် ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင် နေရသူများအတွက် အရေးပေါ် အကူအညီများ လိုအပ်လျက်ရှိ ကြောင်း ဒုက္ခသည်များနှင့် အကူအညီပေးရေးအဖွဲ့အစည်းများက ပြောသည်။
အထူးသဖြင့် ကလေးသူ ငယ်များနှင့် အမျိုးသမီးများအ တွက် အကူအညီများ လိုအပ် လျက်ရှိကြောင်း ၎င်းင်းတို့ကပြော သည်။ ပဋိပက္ခဖြစ်စဉ်များအ တွင်း နေအိမ်များ မီးလောင်ဆုံး ရှုံးမှုများကြောင့် မည်သည့်ပစ္စည်း မှ မကျန်အောင် ဆုံးရှုံးမှုများ ဖြစ် ပွားခဲ့ကြောင်း ထွက်ပြေးတိမ်း ရှောင်လာခဲ့သူများကပြောသည်။
''အ၀တ်တစ်ထည်၊ ကိုယ် တစ်ခုနဲ့ ပြေးလာရတာဆိုတော့ လိုတာကအားလုံးပဲ။ လောလော ဆယ်တော့ ဆန်လှူတဲ့သူရှိပေ မယ့် ဟင်းစားအတွက် အခက်အ ခဲရှိတယ်။ အ၀တ်အစားလည်း လို တယ်"ဟု မြောက်ဦးမြို့ အလို တော်ပြည့်ကျောင်းဆရာတော်က မိန့်ကြားသည်။
မြောက်ဦးမြို့တွင် မတည် ငြိမ်မှုများကြောင့် အောက်တိုဘာ၂၂ ရက်က ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင် လာသည့် ရခိုင်တိုင်းရင်းသား ၈၀၀ခန့်ကို အလိုတော်ပြည့် ကျောင်းအတွင်း စောင့်ရှောက်ထားသည်။ ၎င်းတို့ထဲမှ အများစုမှာ ကလေးသူငယ်များနှင့် အမျိုးသမီးများ ဖြစ်ကြောင်း စာရင်းများအရ သိရသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ၂၀၁၂ ခုနှစ် မေလနှင့် ဇွန်လများအတွင်း ပထမတစ်ကြိမ် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် မတည်ငြိမ်မှုများကြောင့် ပြောင်း ရွှေ့နေထိုင်ရသည့် ဒုက္ခသည်များ အားလည်း ပြန်လည်နေရာချထား မှုများ မပြုလုပ်နိုင်သေးဘဲ ဒုက္ခသည်စခန်းများအတွင်းတွင်သာ နေထိုင်လျက်ရှိသည်။ အဆိုပါ ဒုက္ခသည်စခန်းများတွင်လည်း အစိုးရအစီအစဉ် အကူအညီဖြင့် ထောက်ပံ့မှုများကို အဓိကထားပြီး ရပ်တည်နေရသည်။
''အခုက စပါးရိတ်ချိန်လေ။ စိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်း ပြဿနာ ဖြစ်လို့ ဒုက္ခရောက်တယ်။ ရိတ်တဲ့ အချိန်ကျတော့လည်း ပြဿနာ ဖြစ်တယ်။ ၀မ်းစာတောင်စိုးရိမ် နေရတယ်"ဟု ကျောက်တော်မြို့ နယ်အတွင်းမှ ဒေသခံတောင်သူ ကပြောသည်။
ဒုက္ခသည်များက လတ်တ လောတွင် စေတနာရှင်များနှင့် အ စိုးရ၏အစီအစဉ်ဖြင့် ထောက်ပံ့မှု များဖြင့် ရပ်တည်နေရသော်လည်း ရေရှည်တွင် အခက်အခဲကြုံတွေ့ နိုင်ကြောင်းပြောသည်။
''သောက်ရေသန့်တွေ အဓိ ကလိုတယ်။ စားဖို့အတွက် ဝေ ပေမယ့် ခြိုးခြံပြီးစားရတယ်"ဟု ဘောဒူဗဒုက္ခသည်စခန်းမှ ဦးမောင်အေးမောင်ကပြောသည်။
ဒုက္ခသည်စခန်းများအတွင်း အညစ်အကြေးစွန့်ရန်အတွက် အိမ်သာများ ထားရှိပေးထားသော် လည်း အိမ်သာဖြင့် အညစ်အ ကြေးစွန့်ပစ်လေ့မရှိသည့် ဓလေ့ များကြောင့် ၀မ်းပျက်ဝမ်းလျှောရောဂါများဖြစ်ပွားမည်ကို စိုးရိမ် လျက်ရှိကြသည်။
ဒုက္ခသည်များအား အကူ အညီပေးနေသော ကုလသမဂ္ဂ လက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်းများ ၏အဆိုအရ နေရာပေါင်းစုံမှ ဒုက္ခသည်များထံ အကူအညီများ ရောက်ရန် အခက်အခဲများစွာရှိ ကြောင်းလည်း သတင်းရရှိသည်။
မတည်ငြိမ်မှုများကြောင့် မီး လောင်မှုများအတွင်း ဆုံးရှုံးခဲ့ရာ တွင် ပစ္စည်းဥစ္စာအားလုံးနီးပါး ဆုံးရှုံးခဲ့ရကြောင်း၊ ပြန်လည်ထူ ထောင်ရေးလုပ်ငန်းများ လုပ် ဆောင်ရာတွင် နေအိမ်အဆောက် အအုံများအပြင် အားလုံးလိုအပ် လျက်ရှိကြောင်း ဒုက္ခသည်များက ပြောသည်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးမှရခိုင်ပြည်နယ်ပဋိပက္ခများနှင့်ပတ်သက် ၍ ဒုတိယမြောက်ကြေငြာချက်
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးမှ ရခိုင်ပြည်နယ်ပဋိပက္ခများနှင့်ပတ်သက် ၍ ဒုတိယမြောက်ကြေငြာချက်ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ကြေညာချက် မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
သတင်းထုတ်ပြန်ချက် ( ၂ / ၂၀၁၂)
၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၃၁ ရက်
၁၃၇၄ ခု၊ သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော် ၁ ရက်
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားမှုအခြေအနေနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အသိပေးကြေညာခြင်း
၁။ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားမှုအခြေအနေနှင့် စပ်လျဉ်း၍ နောက်ကွယ်မှ ကြိုးကိုင် လှုပ်ရှားနေသော လူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ ရှိနေကြောင်းသိရှိရသဖြင့် ၎င်းတို့ကို ဖော်ထုတ်၍ ဥပဒေနှင့်အညီ ထိရောက်စွာ အရေးယူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးမှ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (၁/၂၀၁၂) ဖြင့် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။
၂။ တစ်ကျော့ပြန်ဖြစ်ပွားလာသော ပဋိပက္ခဖြစ်စဉ်များတွင် ၂၀၁၂ ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက်မှစ၍ ၂၀၁၂ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၃၀ ရက်အထိ သေဆုံးသူ (၈၉)ဦး၊ ဒဏ်ရာရသူ(၁၃၆)ဦး၊ မီးလောင်ပျက်စီးသည့် လူနေအိမ် (၅၃၅၁) အိမ်နှင့် လူဦးရေ (၃၂၂၃၁)ဦး အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ ထပ်မံဖြစ်ပေါ် ခဲ့ပါသည်။
၃။ လူ့အဖွဲ့အစည်းနှစ်ခု အကြားရှိ ပဋိပက္ခများသည် သာမန်ဆူပူလှုပ်ရှားမှု ဖြစ်စဉ်များမှ လက်နက်ကိုင်အကြမ်းဖက်မှု အခြေအနေသို့ ကူးပြောင်းတော့မည့်လက္ခဏာ အသွင်ဆောင်ကာ လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုပင် လက်နက်ဖြင့် ရန်မူခြိမ်းခြောက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါသည်။ အကြမ်းဖက်မှုပဋိပက္ခ ဖြစ်စဉ်များမှ ဒေသန္တရလုပ်လက်နက်ငယ် (၁၈၀)လက် သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါသည်။ ထို့ပြင် အဆိုပါ လက်နက်ပြုလုပ်သူအချို့နှင့် ပြုလုပ်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် သက်သေခံပစ္စည်း အထောက်အထားများ ကိုလည်း ဖမ်းဆီးရမိသဖြင့် အရေးယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
၄။ ယခုကဲ့သို့ လူစုလူဝေးဖြင့် ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ အကြမ်းဖက်ခြင်း၊ တိုက်ခိုက်ခြင်း၊ မီးရှို့ဖျက်ဆီး ခြင်းကိစ္စများတွင် တစ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းမှာ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ အသေးစိတ်စီစဉ်ခြင်း၊ ဒေသန္တရလုပ် လက်နက်များဖြင့် အချိန်ကိုက် ပူးပေါင်းလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ခြင်းများ တွေ့ရှိရသည့်အပြင်၊ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့ အစည်းနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးယူထားသော အဖွဲ့အစည်းများပါ ပါဝင်ပတ်သက်မှု ရှိနေသကဲ့သို့၊ အခြား တစ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းမှလည်း အချို့သော ပြည်တွင်းပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများ ပါဝင်ပတ်သက်နေသည့် အထောက်အထားများကို တွေ့ရှိရပါသည်။
၅။ ပဋိပက္ခများကို ဖြေရှင်းရာတွင် နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အကျိုးကျေးဇူးရရှိစေမည့် နည်းလမ်းများကို ရွေးချယ်ပြီး ဥပဒေနှင့်အညီ ငြိမ်းချမ်းစွာနှင့် ဉာဏ်ပညာ အမြော်အမြင်ရှိစွာဖြင့် ဖြေရှင်းသွားကြရန် လိုအပ်ပါသည်။ ယခုကဲ့သို့ ဖြစ်ရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ ကမ္ဘာ့အလယ်တွင် နိုင်ငံတော်၏ဂုဏ်သိက္ခာကို မထိခိုက် မညှိးနွမ်းစေရေးအတွက် နိုင်ငံတော်ကိုချစ်မြတ်နိုးသူ ရဟန်းရှင်လူ ပြည်သူအပေါင်းတို့ကလည်း ငြိမ်းချမ်းစွာဖြင့် ပူးပေါင်းကူညီ ဆောင်ရွက်ကြစေလိုပါသည်။
၆။ လက်ရှိအခြေအနေတွင် ပြည်သူလူထု၏ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်များကို ထိခိုက်နစ်နာစေသည့် ဖြစ်ရပ်များ ဆက်လက်မဖြစ်ပေါ်စေရေးအတွက် ပဋိပက္ခဖြစ်စဉ်များ၌ ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများကို နောက်ကွယ်မှ ကြိုးကိုင်လှုပ်ရှားနေသော လူပုဂ္ဂိုလ်နှင့် အဖွဲ့အစည်းများအား နိုင်ငံတော်မှ ထိရောက်စွာ အရေးယူမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေး ကြေညာအပ်ပါသည်။
တကျော့ပြန် ရခိုင်ပြည် ပဋိပက္ခ တွင် နောက်ကွယ်မှ ကြိုးကိုင်သော လူပုဂ္ဂိုလ် နှင့် အဖွဲ့ အစည်း များကို ဖော်ထုတ် တွေ့ရှိ
တကျော့ပြန် ဖြစ်ပွားလာသော ရခိုင် ပြည်နယ် ပဋိပက္ခ တွင် လူစု လူဝေးဖြင့် ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ အကြမ်း ဖက်ခြင်း၊ တိုက်ခိုက်ခြင်း၊ မီးရှို့ ဖျက်ဆီး ခြင်း ကိစ္စ များတွင် တစ်ဖက် အဖွဲ့အစည်း မှာ ကြိုတင် ပြင်ဆင်ခြင်း၊ အသေးစိတ် စီစဉ်ခြင်း၊ ဒေသန္တရ လုပ် လက်နက် များဖြင့် အချိန်ကိုက် ပူးပေါင်း လှုပ်ရှားဆောင်ရွက် ခြင်းများ တွေ့ရှိ ရသည့် အပြင်၊ နိုင်ငံရေး အဖွဲ့ အစည်း နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ယူထားသော အဖွဲ့အစည်း များပါ ပါဝင် ပတ်သက်မှု ရှိနေ သကဲ့သို့၊ အခြား တစ်ဖက် အဖွဲ့အစည်း မှလည်း အချို့သော ပြည်တွင်း ပြည်ပ အဖွဲ့ အစည်းများ ပါဝင် ပတ်သက် နေသည့် အထောက် အထား များကို တွေ့ရှိ ရကြောင်း နိုင်ငံတော် သမ္မတ ရုံးက ယနေ့ည ၈နာရီတွင် သတင်း ထုတ်ပြန် လိုက်သည်။
လူ ၈၉ ဦး သေဆုံးပြီး ၁၃၀ ကျော် ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့သော အဆိုပါ တကျော့ပြန် ပဋိပက္ခ ဖြစ်စဉ် များတွင် လက်နက် ငယ် ၁၈၀ ကို သိမ်းဆည်း ရမိ ခဲ့ပြီး လက်နက် ပြုလုပ်သူ အချို့နှင့် သက်သေခံ ပစ္စည်း များကိုပါ ဖမ်းဆီး ရမိ ခဲ့ကြောင်း၊ လက်ရှိ အခြေ အနေတွင် ပြည်သူ လူထု၏ အသက် အိုးအိမ် စည်းစိမ်များ ထိခိုက် နစ်နာမှု မဖြစ်ပေါ် စေရေး အတွက် နောက်ကွယ်မှ ကြိုးကိုင် လှုပ်ရှား နေသော လူပုဂ္ဂိုလ် အဖွဲ့ အစည်း များအား ထိရောက်စွာ အရေး ယူမည် ဖြစ်ကြောင်း ယင်း ကြေညာ ချက်တွင် ဆက်လက် ဖော်ပြသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် တွင် ဖြစ်ပွား နေသော ပဋိပက္ခ များအား ထိန်းသိမ်းရန် အတွက် မြန်မာ နိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ အင်အား ၅၀၀၀ ကျော်၊ နစက တပ်ဖွဲ့ဝင် အင်အား ၁၀၀၀ ကျော် နှင့် တပ်မတော် တပ်ရင်း ၅၁ ရင်း တို့ လုံခြုံရေး တာဝန် ထမ်းဆောင်လျက် ရှိကြောင်း နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံး ညွှန်ကြားရေးမှူး ၏ facebook စာမျက်နှာ တွင် ဖေါ်ပြသည်။
သတင်း ထုတ်ပြန်ချက် အပြည့် အစုံ ကို ဖတ်ရှုရန် - http://www.president-office.gov.mm/briefing-room/news/2012/10/31/id-1674
ဦးအောင်မင်း ဦးဆောင်တဲ့ အဖွဲ့နဲ့ ဦးဆွမ်လွတ်ဂန် ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့တရုတ်နိုင်ငံ ရွှေလီမြို့မှာတွေ့
Published on Oct 31, 2012 by RFABurmeseVideo
ဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း ဦးဆောင်တဲ့ အစိုးရ ငြိမ်းချမ်းရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နဲ့ KIO အမြဲတမ်း ဗဟိုကော်မတီဝင် ဦးဆွမ်လွတ်ဂန် ဦးဆောင်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့တို့ တရုတ်နိုင်ငံ ရွှေလီမြို့မှာ မနေ့က တွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို RFA အဖွဲ့သား ကိုဂျေက တင်ပြထားပါတယ်။
ရွှေညဝါဆရာတော် အရှင်ပညာသီဟ ဟာ ကနေဒါနိုင်ငံမှာ ရက်သတ္တပတ်ကြာ ဗီဇာရခဲ့ပါတယ်။ ထိုရရှိတဲ့ တပတ်အတွင်းမှာပဲ ကနေဒါနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့ ဗန်ကူးဗား ဘီစီ၊ တိုရန်တို၊ ကယ်ဂရိ၊ စက်စကာတွန်း မြို့ များမှ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင် မြန်မာ ပြည်သားများက ဆရာတော်ကို တရားဟောရန် ပင့်လျှောက်လာကြပါတယ်။ ထိုပင့်လျှောက်ချက်အရ ဆရာတော်ဟာ ပထမဆုံးတရားပွဲကို(နိုဝင်ဘာ၊၃၊၂၀၁၂) ညနေ(၆-၁၀)နာရီထိ ဗန်ကူးဗားမှာတရား ဟောမှာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုတရားပွဲအပြီး (နိုဝင်ဘာ – ၃)ရက်၊ ည ၁၁း၃၀ မှာ လေယာဉ်ဖြင့် တိုရန်တိုသို့ကြွချီမှာဖြစ်ပါတယ်။ (နိုဝင်ဘာ-၄)ရက်မှာ တိုရန်တိုတွင် ဒုတိယမြောက် တရားပွဲ ကျင်းပမှာဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။ နောက် (၅)ရက် ကြာမျှ တိုရန်တိုမြို့ မှာ သီတင်းသုံးနေထိုင်အပြီး (နိုဝင်ဘာ-၁၀-၂၀၁၂)တွင် ကယ်ဂရိမြို့ မှာ တတိယမြောက် တရားပွဲကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။ စတုတ္ထမြောက်တရားပွဲက်ို (နိုဝင်ဘာ-၁၁ -၂၀၁၂) မှာ စက်စကာတွန်းမြို့ တွင်ကျင်းပမှာဖြစ်ပြီး ဒီတရားပွဲဟာ ကနေဒါမှာ နောက်ဆုံးတရားပွဲဖြစ်ပါတယ်။ ဗန်ကူးဗား ဘီစီသို့နိုဝင်ဘာ ၁၂-ရက်နေ့ ပြန်လည်ရောက် ရှိလာ မယ်လို့သိရပါတယ်။ နောက်နေ့(နိုဝင်ဘာ -၁၃- ၂၀၁၂)မှာ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ကြွချီတော့မှာဖြစ်ကြောင်း ဗန်ကူးဗား – ဗုဒ္ဓရံသီ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော် အရှင် ဂေါသကနဲ့ ကိုတင်နွယ်တို့ က အကြောင်းကြားလာပါတယ်။
ရွှေညဝါဆရာတော်ဟာ ပြည်ပတရားပွဲများကျင်းပနေရခြင်းမှာ ပြည်တွင်းမှာ တရားဟောခွင့်ပိတ်ပင်ထားခြင်းခံရသောကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ယခင် သတင်းသုံးနေထိုင်ခဲ့တဲ့ ရန်ကုန်မြို့ ၊ ကြည့်မြင်တိုင်၊ နတ်စင်လမ်းက ရန်ကုန်ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ကျောင်းတော် တွင်း သီတင်းသုံးခြင်းနဲ့ သင်တန်းပို့ ချခြင်းများကိုလဲ အာဏာပိုင်တွေက ပိတ်ပင်ခဲ့ပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ ဆရာတော် ဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ မသက်ဆိုင်တဲ့ အသုံးအနှုံးများထည့်သွင်းဟောပြောမှု၊ တရားဟောပိတ်ပင်ကာလအတွင်း မန်းဒီချုပ်ရုံးဖွင့် ပွဲတွင် သြဝါဒပေးခြင်းကို တရားဟောသည်ဟု ရိုးစွတ်ကာ နေထိုင်ရာ ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်မှ အပြီးဖယ်ရှားပေးခဲ့ရတာကြောင့် ယခု ရန်ကုန်မြို့ စွန် မှော်ဘီမှာ ဝါးတဲငယ်လေးနဲ့သီတင်းသုံးနေရပါတယ်။ ဆရာတော်ဟာ ထေရဝါဒသာသနာတည်တံ့ပြန့် ပွားရေးအတွက် ယနေ့ ချိန်ထိ ရဟန်းသိက္ခာပုဒ်မပျက် ကျင့်ကြံနေထိုင်ရင်း တပြည့်ပေါင်း (၁၀၀၀)ကျော်ကို စာဝါချပေးခဲ့သူ သံဃာမြတ်တပါးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မနက်တိုင်း တပြည့်များနှင့် ဆွမ်းခံ ကြွပြီး ပိုလျှံသမျှ စားသောက်ဖွယ်ရာများကို နေ့ စဉ် အလှည့်ကျ မရှိဆင်းရဲသူများရပ်ကွက်များသို့ လည်းကောင်း၊ မိဘမဲ့ ဂေဟာများသို့ လည်းကောင်း စွန့် ကြဲဒါနပြုခဲ့တဲ့ ဆရာတော်လဲဖြစ်ပါတယ်။ ယခုတိုင်လဲ မိမိပျိုးထောင်ခဲ့တဲ့ ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် စာသင်သားတပြည့်များအတွက် ငွေကြေး၊ပစ္စည်း(၄)ပါးအတွက် ထောက်ပံ့စွန့် ကြဲဒါနပြုနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိ သီတင်း သုံးရာ မှော်ဘီဝါးတဲကျောင်းကိုလဲ စာဝါချနိုင်သည့် ကျောင်းတော်ကြီးဖြစ်ရန် ရည်သန်ထားကြောင်း သိရပါတယ်။ ထို့ အတွက်ကြောင့် ဆရာတော်နဲ့ ကြုံကြိုက်ခွင့်၊ တရားနားခွင့်ရခိုက်မှာ သာသနာ့ဒါယကာ၊ ကျောင်းဒါယကာ၊ဒါယိကာမများ ဖြစ်ခွင့်ရနိုင်တဲ့အတွက် မိမိတို့ တတ်နိုင်သမျှ လှူဒါန်းနိုင်ရန် မိုးမခသတင်းမီယာမှ နိဗ္ဗာန်အကျိုးမျှော်ကာ ဆော်သြလိုက်ပါ ရတယ်။ ။
ဗဟိုစည် ဆေးရုံ မှားယွင်း ကုသသည်ဟု ဆိုကာ သမ္မတ ထံတိုင်ကြား
အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက်နေ့က ကြီးမားသော ဆေးကုသမှု မှားယွင်း ပေါ့လျော့မှုကြောင့် ဟုဆိုကာ ဗဟိုစည် ဆေးရုံအား ကာယကံရှင် လူနာမိသား စုက သမ္မတထံတိုင်ကြားခဲ့ကြောင်း လူ ထုပုံရိပ်မှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။ ကာယကံရှင်လူနာ ဒေါ်လှစိန် အသက်၆၉နှစ်သည် မြိတ်မြို့မှ လာ ရောက်၍ ဗဟိုစည်ဆေးရုံဒုတိယ အ လွှာ၊ အခန်းအမှတ် ၂၁၁ ၌ ကျောက် ကပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆေးကုသမှုအား အောက်တိုဘာ ၁၁ ရက်တွင် ကုသမှု ခံယူရာ အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက်တွင် အကြောထဲဆေးသွင်းမှုကြောင့် ဆေး ထိုးခံရသည့်လက်တွင် အရည်ကြည်ဖု များ ဖောင်းပွလာပြီး လက်မှာညိုပုပ် လာကြောင်း ကာယကံရှင် ဒေါ်လှစိန် ၏ သားဖြစ်သူက ဖြစ်စဉ်ကို လူထုပုံရိပ် သို့ပြောသည်။
"၁၁ ရက်နေ့မှာ ဒီဆေး ပဲ ၅ လုံးထိုးတယ်၊ ၁၂ ရက်နေ့မှာ လည်း ၅ လုံးထိုးတယ်၊ ၁၃ ရက်နေ့ကျ တော့ တစ်ဖက်ပဲထိုးနေရလို့ဆိုပြီး လက်ပြောင်းထိုးတယ်၊ ထိုးထိုးချင်း နှစ် မိနစ်လောက်မှာ အမေကနာတယ် ပြောတယ်၊ ဆေးထိုးပေးတဲ့ဆရာမက ဒီဆေးက ဒီလိုပဲ နာတတ်တယ်လို့ပြော တော့ အမေက ကြိတ်ခံတယ်၊ ဒါပေမဲ့ မိနစ် ၂၀ လောက်လဲရောက်ရော အမေကမခံနိုင်တော့လို့ ကျူကျူပါ အောင်ငိုတော့မှ ရပ်လိုက်တယ်၊ ဆေး ကလည်း အဲဒီနေ့က သုံးလုံးပဲထိုးလိုက် ရတယ်၊ ပြီးတော့လက်က ဓာတ်ပုံထဲ မှာ မြင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်သွားတာပဲ"ဟု ၄င်းကပင် ဆက်လက်ရှင်းပြသည်။ မိမိတို့အနေဖြင့် မိခင်ဖြစ်သွားသည့် အပေါ် သက်ဆိုင်သည့်ဆရာဝန်များ အနေဖြင့် ဆေးပညာရှင်များသို့ အ ကြောင်းကြားသော်လည်း ချက်ချင်း ရောက်မလာနိုင်ဘဲ အချိန်အတော် ကြာမှ ရောက်လာကြောင်း၊ ထို့နောက် မိခင်၏ လက်အားထောင်ထားပါက ပျောက်သွားမည်ဟု ဆရာဝန်မက ပြောကြောင်း၊ အမှန်တကယ်ဆိုလျှင် ၄င်းတို့အနေနှင့် သိသင့်ပြီး ချက်ချင်း ဆေးကုသမှုပိုင်းဆိုင်ရာကို ပြုလုပ်ပေး သင့်ကြောင်း၊ မိမိတို့၏ မိခင်မှာ ရောဂါ ဝေဒနာခံစားနေရသည့်ကြားမှ ဆေးရုံ ၏ ပေါ့လျော့မှုကြောင့် လက်ထိခိုက် သွားသည့် ဝေဒနာခံစားနေရသည်ကို ရင်နာကြောင်း ၄င်းက ဆိုသည်။
" အသည်းအထူးကုဆရာဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်ဝင်းရောက်လာတော့မှ ဒါ ဘာလုပ်နေတာလဲ၊ မြန်မြန်ခွဲစိတ်၊ ဘယ်သူ့အမိန့်ကိုမှ မစောင့်နဲ့၊ ငါလုပ် ခိုင်းတာဆိုမှ ၁၅ ရက်နေ့က ခွဲစိတ် လိုက်တယ်၊ ကျွန်တော့်အထင် လက် က အကောင်းပကတိအတိုင်းဖြစ်ဖို့ မ လွယ်တော့ဘူး၊ တော်တော်ကြီးဖြစ် သွားတာပါ၊ ဆရာဦးခင်မောင်ဝင်းက တော့ ဒါမဖြစ်သင့်ဘူး၊ ပထမပိုင်းနာ တယ်ဆိုကတည်းကရပ်သင့်တယ်၊ မရပ်ဘဲ ဆက်ထိုးလိုက်တော့ သွေး ကြောမျှင်တွေပေါက်ပြီး ဖြစ်သွားတာ၊ အရင်ဆုံး check လုပ်သင့်တယ်၊ အတင်းထိုးလို့ ဖြစ်သွားတယ်ဆိုပြီး ပြောတယ်။ ၁၈ ရက်နေ့မှ ဗဟိုစည် MD ဦးကျင်ထွန်းကလည်းဝန်ခံတယ်၊ လူနာရဲ့ ရောဂါကြောင့်ဆိုပြီး အဖြစ်မှန် ကို လိုက်ဖုံးတယ်"ဟု လူနာရှင် ဒေါ်မြ စိန်၏သားကပင်ပြောသည်။ မိမိတို့အနေဖြင့် လျော်ကြေးတောင်း ယူမှုမရှိသလို ရယူမှုဆန္ဒလည်းမရှိ ကြောင်း၊ မိခင်ဖြစ်သွားသည့်အပေါ် နစ်နာသည်ဟု ယူဆသဖြင့် မှားယွင်း စွာ ကုသခြင်း၊ အဖြစ်မှန်ဖျောက်ကွယ် ထားခြင်းကြောင့် ယခုကိစ္စအား သမ္မတ ထံတိုင်ကြားလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း၊ မိခင် အား ယင်းဆေးရုံတွင်ပင် ဆေးကုသ စရိတ်ပေး၍ ဆေးကုသမှုခံယူနေ ကြောင်း၊ မိခင်ဖြစ်သွားသည့်နေ့က သူနာပြုနှင့် တာဝန်ရှိဆရာဝန်၏ အမည်အား လုံးဝစုံစမ်း၍မရကြောင်း အထက်ပါပုဂ္ဂိုလ်က ဆိုသည်။ လူထုပုံရိပ်မှ ဗဟိုစည်ဆေးရုံသို့ အောက်တိုဘာ ၂၂ ရက်နေ့တွင် သွားရောက်မေးမြန်းရာ အစပထမပိုင်း တွင် တာဝန်ရှိသူများမရှိဟု ဒေါက်တာ ဒေါ်စန်းဝင်းကဆိုသောကြောင့် တိကျ သည့်အဖြေမရရှိခဲ့သော်လည်း ယင်း နေ့ ညနေတွင်ပင် ဆက်သွယ်မေး မြန်းရာ ဒေါက်တာဒေါ်စန်းဝင်းကပင် အ ထက်လူကြီးများ၏ ညွှန်ကြားချက်အရ ယခုကိစ္စအား လူနာရှင်နှင့် လူနာရှင် အားကုသသည့်ဆရာဝန်မှ လွဲ၍ ပြင်ပ သို့ပြောမည်မဟုတ်ကြောင်း ဖြေဆို ထားသည်။
သတင်း-THE PUBLIC IMAGE
မြန်မာစလွယ်လေး ပန်းဝင်လှဖို့ Like ပေးကျပါ
အခု LIKE မဲအရေအတွက်မှာ...
Miss Myanmar Nida ယမုံမိုး ကအပြတ်အသတ်ကျော်ဖြတ်သွားပါတယ်
Miss Myanmar က like (12835) နဲ့ ပထမနေရာဦးဆောင်နေပြီး
Miss Georgia က like ( 10104) နဲ့ ဒုတိယနေရာမှာဖြစ်ပါတယ်
Here she is. Beautiful and wonderful Miss Myanmar candidate. Please support her, by Like-ing her photo.
Written by သဇင်ဥ
Wednesday, 31 October 2012 15:50 ဘင်္ဂလာဒေ့ခ်ျနိုင်ငံမှ မလေးရှားသို့ တရားမဝင် ဝင်ရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်ရန် သွားသောစက်လှေတစ်စီး ဘင်္ဂလားပင်လယ်ပြင်တွင် တနင်္ဂနွေနေ့က နစ်မြှုပ်သွားခဲ့သဖြင့် (၁၂၈)ဦးအနက် (၁၂၂)ဦး ပျောက်ဆုံးနေကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ယင်းမလေးသွား မှောင်ခိုစက်ဘုတ်မှာ ဘင်္ဂလာ ကော့စ်ဘဇားခရိုင် တာခ်နာမြို့နယ် ဆာဟ်ပေါ်ရီရ်ကျွန်းမှ တနင်္ဂနွေနေ့က စတင် ထွက်ခွာသွားခြင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့် ပင်လယ်ပြင်တွင် ကျောက်ဆောင်ကို တိုက်မိ၍ နစ်မြှုပ်သွားခြင်းဖြစ်သည်ဟု အသက်ရှင်လာသူ(၆) ဦးတို့မှ အတည်ပြုပြောဆိုလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ စက်လှေနစ်မြှုပ်ရာတွင် ငါးဖမ်းစက်လှေများမှ ကယ်ဆယ်၍ အသက်ရှင်လာသူ(၆)ဦးမှာ တာခ်နာမြို့နယ်မှ အာဘူဘော်ကော်ရ်၊ နရုဟိုဆန်၊ မာဟ်ဘူဘ်၊ ဘုတ်မောင်းသူ စူနိုင်က္ကာနှင့် ကျန်နှစ်တို့ဖြစ်ကြောင်းဆိုသည်။
ဆာဟ်ပေါ်ရီရ်ကျွန်းမှ မလေးသို့ မှောင်ခိုသွားမည့်သူများနှင့် စက်လှေများကို မကြာခဏ ဖမ်းဆီးလေ့ရှိခဲ့ပြီး ယခုအခါ ဖမ်းဆီးရမိနေခြင်းမှာ အမျိုးသမီး၊ ကလေးသူငယ်နှင့် မိသားစုများပါ ပါဝင်နေကြောင်း သိရှိရသည်။
တာခ်နာမြို့နယ်အခြေစိုက် အမှတ်(၄၂)BGB မှ အရာရှိတစ်ဦးဖြစ်သူ ဇာဟိဒ်ဇာဟာန် က ယင်းဖြစ်ရပ်မှာ မှန်ကန်ကြောင်းနှင့် အသေးစိပ် အလောင်းများဆယ်ယူရရှိရန် ကြိုးပမ်းလုပ်ဆောင်နေကြောင်း Arakantimes သို့ ပြောသည်။
ယခုကဲ့သို့ မလေးရှားသို့ တရားမဝင် ဝင်ရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်ရန် ဘင်္ဂလာမှာ ခိုးထွက်၍ သွားလာနေခြင်းမှာ နှစ်အတော်ကြာနေပြီဖြစ် ကြောင်း တာခ်နာမြို့နယ်မှ ငါးပွဲရုံပိုင်ရှင်များ၏ ပြောဆိုချက်များအရ သိရသည်။
Written by သဇင်ဥ Wednesday, 31 October 2012 11:22
ဘင်္ဂလာဒေ့ခ်ျနိုင်ငံရှိ မိမိနေအိမ်သို့ ရခိုင်ပြည်မှ ပြန်လည်လာရောက်နေထိုင်မည့် ဘင်္ဂလီများ... လက်ရှိအာဏာရပါတီမှ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးက ကိုယ့်အိမ်ကို မီးရှို့သူနှင့် အကြမ်းဖက်သမားများကို လက်ခံလိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်း ထုတ်ဖေါ်ပြောဆို လိုက်ပြီး နယ်စပ်တစ်လျှောက် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များကို တင်းကျပ်စွာ ချထားလျှက်ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
ရခိုင်ပြည်မှ စက်လှေများဖြင့် ထွက်ခွာသွားပြီး ဘင်္ဂလာသို့ ၀င်ရောက်ရန် ကြိုးပမ်းနေကြသော ဘင်္ဂလီမူဆလင်များနှင့်ပတ်သက်၍ ဘင်္ဂလာဒေ့ခ်ျနိုင်ငံသားများအား Arakantimes မှမေးမြန်းရာ " ဘင်္ဂလာက အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် မိုဟာဘုအာလောင်ဟာနို့ က " ကိုယ့်အိမ်ကို မီရှို့သူတွေနဲ့ အကြမ်းဖက်သူတွေကို ဘင်္ဂလာက လက်ခံဖို့ လုံးဝနေရာမရှိဘူးလို့ ဆိုပါတယ်၊" ပြီးတော့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဒီပူမိုနီက " ရခိုင်ပြည်-ဘင်္ဂလာတို့မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အဆောက်အအုံတွေကို မီးရှို့မှုဟာ အကြမ်းဖက် သမားတွေဘဲဖြစ်တယ်၊" ကျွန်တော်မြင်တာက " သူတို့က ကိုယ့်အိမ်ကို လာကြတဲ့သူတွေပါ၊ ဒီကလက်မခံတဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်းက ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးနဲ့ မြန်မာတိုင်းရင်းသားခံယူနေမှုအတွက် ဖြစ်ပါတယ်။"ဟု ဘင်္ဂလီ Mr. Mona ကွန်မြူနစ် ကျောင်းသား လူငယ်တစ်ဦးကလည်း သူ၏အမြင်ကို ယခုကဲ့သို့ ရှင်းပြသွားခြင်းဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျနိုင်ငံ၊ ကော့စ်ဘဇားခရိုင်အတွင်းတွင် ယခုအပတ်အတွင်း ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသူများဟုဆိုကာ ဘင်္ဂလီ (၂၀၀)ခန့်အား ဖမ်းဆီးပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်စပ်ဖက်သို့ ပြန်လည်ပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းနှင့် အဆိုပါ စက်လှေများဖြင့် ထွက်ခွာသွား သူများအနက် တစ်ချို့မှာ မောင်တောမြို့နယ်သို့ ဆိုက်ရောက်သွားပြီး ဒေသအာဏာပိုင်များက ယာယီဒုက္ခသည်စခန်းများ တည်ဆောက်ပြီး ကူညီပေးနေကြောင်း ဒေသသတင်းများအရ သိရသည်။
ရခိုင်ပြည်တွင် ကျူးကျော်နေထိုင်ခဲ့သော ဘင်္ဂလီအများအပြားမှာ ကော့စ်ဘဇားခရိုင်အတွင်းသို့ ရောက်ရှိလာပြီး ခိုလုံလျှက်ရှိနေကြောင်း ဒေသခံများက ပြောသည်။
"သူတို့ကို ကြည့်တာနဲ့ ဘယ်ကဆိုတာ သိပါတယ်၊ ပုဆိုးဝတ်တာနဲ့ အသွားအလာကို ကြည့်ကတည်းက သိပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် သူတို့ ကိုင်ထားတာက ဘင်္ဂလာက နိုင်ငံသားကဒ်တွေပါ၊ တစ်ချို့ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံသားကဒ်နှစ်ခု ပူးတွဲကိုင်ထားကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။"
ဘူးသီးတောင်နှင့် မောင်တောမြို့နယ်တို့တွင် နေထိုင်နေကြသော အလယ်လတ်တန်းမှ အမြင်ဆုံးဘင်္ဂလီများမှာ မြန်မာ-ဘင်္ဂလာ နိုင်ငံသား ကဒ်နှစ်ခုကို အများအပြား ကိုင်ဆောင်လျှက်ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျနိုင်ငံ ကော့စ်ဘဇားမြို့ရဲဌာနက Rohigar Solidraty Organization (RSO)မှ ခေါင်းဆောင် အာဟာမတ်ဒ်အား ဖမ်းဆီးပြီး ရခိုင်ပြည်-ဘင်္ဂလာတို့တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော အကြမ်းဖက်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ စစ်ဆေးမေးမြန်းမှုများ ပြုလုပ်နေကြောင်း ရဲမင်းကြီး ဇော်ဆီမ် အူဒ္ဒိန် က ထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုထားသည်။
ရခိုင်ပြည်တွင် အောက်တိုဘာလ(၂၁)ရက်နေ့က ပြန်လည်စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဘင်္ဂလီ-ရခိုင် အဓိကရုဏ်းအတွင်း မိမိနေအိမ်များကို မီးရှို့ပြီး စက်လှေ အစီး(၄၀)ကျော်ဖြင့် ထွက်ခွာလာသူများမှာ ယခုအခါ ဘင်္ဂလာသို့ဝင်ရောက်ရန် ကြိုးပမ်းနေ၍ နယ်စပ် တလျှောက် တပ်လှန့်မှုများရှိနေသည့်အတွက် မောင်တောမြို့နယ် နစကဘက်မှလည်း နယ်စပ်အတွင်း တပ်လှန့်မှုများ ပြုလုပ်ထားကြောင်း စုံစမ်း သိရှိရသည်။
http://www.arakantimes.net/burmese/index.php/2012-02-24-06-58-57/620-2012-10-31-112250 See More
(Photo by : အင်တာနက်သတင်းစာမျက်နှာ)
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 10/29/20120အကြံပြုခြင်း
ကားတိုက်ခံရပြီး အတိတ်မေ့သွားတဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီး
The First Music News
sandyဟာရီကိန်းအန္တရာယ် ကာကွယ်ရေး စိုင်းပြင်း
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ပြည်မ ကုန်းတွင်းပိုင်းကို အင်အားအပြင်းထန်ဆုံး မုန်တိုင်းတိုက်ခတ်မယ်လို့ မိုးလေ၀သ ကျွမ်းကျင်သူတွေက ခန့်မှန်းနေတာကြောင့် အရှေ့ဘက် ကမ်းခြေတကြော မှာ လေနဲ့ရေဘေး အန္တရာယ် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး ပြင်ဆင် နေကြပါပြီ။
စန္ဒီ လို့ နံမည်ပေးထားတဲ့ ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းဟာ Atlantic သမုဒ္ဒရာ ကမ်းရိုးတန်း ဘက်ကို ဦးတည်နေပြီး မြောက်ဘက်က လာမယ့် ဆောင်းရာသီမုန်တိုင်း ၂ ခုနဲ့ ထိတွေ့ပြီး Super Storm ခေါ် အင်အားအပြင်းထန်ဆုံး မုန်တိုင်းအသွင်ပြောင်း တိုက်ခတ်မယ်လို့ မိုးဇလကျွမ်းကျင်သူတွေက ခန့်မှန်းနေကြပါတယ်။ အဲဒီ Super Storm ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းဟာ မိုင် ၇၅၀ အ၀န်းအ၀ိုင်းအထိ ကျယ်ပြန့်နိုင်ပြီး အရှေ့ဘက်ကမ်းခြေတကြောက လူဦးရေ သန်း ၆၀ ကို ဒုက္ခပေးနိုင်ပါတယ်။
မုန်တိုင်း တိုက်ခတ်နိုင်တယ်လို့ ခန့်မှန်းထားတဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အရှေ့ဘက်ခြမ်းက ၀ါရှင်တန်ဒီစီ၊ ဘော်လ်တီမိုး၊ နယူးယောက်၊ ဖီလာဒဲဖီးယားနဲ့ ဘော်စတွန် မြို့ကြီးတွေမှာ ကြိုတင် ကာကွယ်ကြဖို့ ပြင်ဆင်နေကြပါပြီ။ စန္ဒီ ဟာရီကိန်း မုန်တိုင်းဟာ အရှေ့ဘက်ကမ်းရိုးတန်းကို တနင်္လာနေ့ ညပိုင်းမှာ တိုက်ရိုက် ၀င်ရောက် တိုင်ခတ်နိုင်တယ် ဆိုတဲ့ ခန့်မှန်းချက် အရ သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူတွေက သတိပေး နှိုးဆော်နေပါတယ်။
အရှေ့ဘက်ခြမ်းက ပြည်နယ်အတော်များများမှာ လေမုန်တိုင်းနဲ့အတူ မိုသည်းထန်ပြီး ရေကြီးနိုင်သလို တချို့ဒေသတွေ မှာ ဆီးနှင်းမုန်တိုင်းပါ တိုက်ခတ်နိုင်ဖွယ်ရှိပါတယ်။ အခုလောလောဆယ် စန္ဒီ မုန်တိုင်းဟာ တနာရီ ၇၅ မိုင်နှုန်းနဲ့ တိုက်ခတ်နေပြီး မုန်တိုင်းဗဟိုချက်ကနေ မိုင် ၁၀၀ အ၀န်းအ၀ိုင်းနဲ့ လည်ပတ် ရွေ့လျားနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
နိုဝင်ဘာ ၆ မှာ ကျင်းပတော့မယ့် အမေရိကန် သမ္မတရွေးကောက်ပွဲကိုတောင် အများကြီး ထိခိုက်နိုင်ချေရှိတဲ့ စန္ဒီလို့ အမည်ရတဲ့ ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းကြီးဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ အရှေ့ဘက်ကမ်း ကုန်းတွင်းကို စတင် ဝင်ရောက် တိုက်ခိုက်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နယူးယောက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး အင်ဒရူး ကိုမိုကတော့ စန္ဒီမုန်တိုင်း ရန်ကနေ လွတ်အောင် နယူးယောက်မြို့ရဲ့ ပြည်သူ့ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ယန္တရားဖြစ်တဲ့ မြေအောက် ရထားတွေ၊ မြေပေါ် ရထားတွေနဲ့ ဘတ်စ်ကားတွေကို ပြေးဆွဲမှု ရပ်ဆိုင်းစေခဲ့ပါတယ်။
ဒီမုန်တိုင်းကြောင့် လူဦးရေသန်း ၆၀ လောက်အထိ ထိခိုက်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး၊ နိုဝင်ဘာ ၆ ရွေးကောက်ပွဲ အတွက် မဲပေးရမယ့် ပြည်နယ်တွေကိုလည်း ထိကုန်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လောလော ဆယ်မှာတော့ သမ္မတအိုဘားမားက ဒီမုန်တိုင်းကြောင့် ပြည်သူတွေ ထိခိုက်မှာကို အထူးစိုးရိမ်လို့ သတိပေးပါတယ်။
ဒီမုန်တိုင်း အန္တရာယ်ကို အားလုံးအနေနဲ့ သတိကြီးကြီးထားဖို့ သူ့အနေနဲ့ သတိပေး ပါတယ်လို့ သမ္မတ အိုဘားမားက ပြောပါတယ်။ အမေရိကန် ဗဟိုအစိုးရအနေနဲ့ ပြည်နယ်အစိုးရတွေနဲ့ ချိတ်ဆက်လို့ အထူးဂရုစိုက်ပြီး မုန်တိုင်းကို ရင်ဆိုင်ဖို့ ပြင်ဆင် လုပ်ဆောင်ထားတယ်။ ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်း ကိုယ်တိုင် ရွေးချယ် တင်မြှောက်ထားတဲ့ ပြည်နယ်က တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ စကားကို သေသေချာချာ နားထောင်ပါလို့ သမ္မတအိုဘားမားက မှာကြားပါတယ်။
အနိမ့်ပိုင်း အရပ်ဒေသတွေမှာ နေထိုင်တဲ့ လူပေါင်း သုံးသိန်းခုနစ်သောင်း ငါးထောင်ကိုတော့ နေရာရွှေ့ပြောင်းနေကြဖို့ ပြောထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ စာသင် ကျောင်းတွေကိုလည်း ပိတ်ထားလိုက်ပါပြီ။
စန္ဒီဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းဟာ ကာရစ်ဘီယန်အပိုင်းမှာတော့ လူပေါင်း ၆၀ ကို သေစေခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ မနေ့ညကတော့ မုန်တိုင်းမျက်စိနေရာဟာ နယူးယောက်မြို့တောင်ပိုင်း မိုင် ၅၀၀ ကျော်လောက်ကို ရောက်နေပြီဖြစ်လို့ ဒီကနေ့မှာတော့ နယူးယောက်ကို လုံးဝ ဝင်ပါတော့မယ်။
နယူးယောက်မြို့တော်ဝန် မိုက်ကယ် ဘလွန်းဘာ့ဂ်ကတော့ ပြည်သူတွေအနေနဲ့ မုန်တိုင်းဒဏ်ကလွတ်အောင် အရေးတယူလုပ်ကြဖို့ တိုက်တွန်းနေပါတယ်။ နယူးယောက်မြို့က မဝေကတော့ မြေအောက်ရထားတွေ မပိတ်ခင် မြို့ခံတွေက မုန်တိုင်းတိုက်ရင် မီးပျက်၊ ရေပျက် ဖြစ်နိုင်တာမို့ ရေ၊ ဖယောင်း၊ ဆန်စသဖြင့် လိုအပ်တာတွေ ဝယ်နေကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
နယူးယောက်စတော့အိတ်ချိန်းကိုလည်း ဒီကနေ့ပိတ်ထားမှာဖြစ်ပြီး၊ အွန်လိုင်းမှာတော့ အရောင်းအဝယ်တွေ ဆက်လုပ်နိုင်ကောင်းတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ နယူးယောက်မှာတော့ ရုံးတွေ တော်တော်များများ ဒီကနေ့နဲ့ မနက်ဖြန် နှစ်ရက် ပိတ်ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်
"စန္ဒီ" ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်း ပြင်ဆင်ရေးအတွက် ဝါရှင်တန်မှာ ရေဗူးကပ်လိုက်တွေ စတိုးတွေမှာ အလုအယက်ဝယ်နေကြတာမို့ ရေကဒ်တွေ အရောင်းရသွက်နေပြီး အချို့ဆိုင်များမှာ ဝယ်မရနိုင်တော့ပါ။
OIC အား တုံ့ပြန်မှုများကြောင့် မင်းပြားပြသာနာ စတင်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဒေသခံများဆို
OIC ကို လက်မခံသည့် ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုများကြောင့် အစ္စလာမ်လူမျိုးတို့မှ မကျေနပ်သည့် တုန့်ပြန်မှု ကြောင့် အောက်တို ဘာ(၂၀)ရက်နေ့က မင်းပြားမြို့ရှိ ကျေးရွာများတွင် ပြသာနာစ တင်ဖြစ်ပွားခဲ့ရ ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဒေသခံတို့က ဆိုသည်။
အဆိုပါနေ့ညနေပိုင်းတွင် ပိတ်သေရွာရှိရခိုင်လူမျိုးထမင်းစားနေသည်ကို အစ္စလာမ်လူမျိုးတစ်ဦးမြှား နှင့်ပစ်ရာမှ ၄င်းဘေးရှိအိမ်တိုင်ကို လာရောက်ထိမှန်သည်မှ အစပြုပြီးး ရွာသားများမှ သံချောင်း ခေါက်စဉ် စုရုံးလာသော ဒေသခံ ရခိုင်လူမျိုးများနှင့် တဖက်နှင့် တဖက် ရန်ပြုရာမှ ကျေးရွာ(၇)ခန့် မီးရှို့သည် အထိ ဖြစ်ခဲ့ရသည်ဟု ဒေသခံတို့က ဆိုသည်။
မင်းပြားမြို့၌ အောက်တိုဘာ ၂၀ ရက်မှ ၂၂ ရက်နေ့များအတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးသော အစ္စလာမ်များ နေထိုင်ရာ ကျေးရွာ မီးလောင်မှုများ သည် OIC ကို လက်မခံသည့် ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲများကို တုန့်ပြန်သည့်အနေ ဖြင့် ကြိုတင်ကြံစည်မှုများကြောင့် ဖြစ်ပွားခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်ဟု မင်းပြားမြို့ ဒေသခံရခိုင် လူမျိုးများ၏ ပြောပြချက်များအရ သိရသည်။
အစ္စလာမ်လူမျိုးများ နေထိုင်ရာ ကျေးရွာများ OICကို လက်မခံသည့် ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲများး မီးလောင်မှု များကို လက်မခံသည့် ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲများ ကို တုန့်ပြန်သည့်အနေဖြင့် ကြိုတင် ကြံစည်မှုများကြောင့် ဖြစ်ပွားခဲ့ရခြင်း ဖြစ်သည်ဟု မင်းပြားမြို့ ဒေသခံရခိုင်လူမျိုးများ၏ ပြောပြချက်များအရ သိရသည်။
မင်းပြားမြို့တွင် မွတ်ဆလင်လူမျိုးများ နေထိုင်ရာ ပိတ်သေရွာမှလူနည်းစု ရခိုင်လူမျိုးများကို ရန်ပြုရာမှ စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ရပြီး တစ်ဖက်နှင့် တစ်ဖတ် ခိုက်ရန်ပြုရာမှ ရခိုင်လူမျိုးများ စုရုံးခဲ့ခြင်းကြောင့် မွတ်စလင် လူမျိုးအများစုနေထိုင်သည့် သရက်အုပ်၊ အောက်တိုင်၊ ပုတ်ဖြတ်၊ စမ္ဘလေ၊ ပိတ်သေ၊ ကာဒါ၊ ကန်ထိုး တန်း၊ နဂါးယက်-ပေါက်တော စသည့်ကျေးရွာများမှာ မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရသည်ဟု သိရသည်။
“ရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ ကိစ္စရပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခြုံငုံပြောချင်ပါတယ်၊ရာဇ၀တ်မှုတွေ ထူပြော လာရတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး၊ တရားဥပဒေယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိလာအောင် ပြည်သူတွေကြားမှာ စေ့ဆော်ဆောင်ရွက် ဖို့လိုပါတယ်၊ အပိုင်း(၂) ပိုင်းနဲ့ပြောရရင် တစ်ပိုင်းက တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှု ရှိရပါမယ်၊ ကျန်တစ်ပိုင်းက အခုဖြစ် နေတဲ့ ဘာသာကြီးနှစ်ခုကြားမှာ ချစ်ကြည့်မှုတွေရှိလာအောင် တာဝန်ရှိသူတွေ က ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မယ်ဆို ရင် ပိုကောင်းပါမယ် ”ဟု အစ္စလာမ်ကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝဏ္ဏရွှေက ပြောသည်။
မွတ်စလင်လူမျိုးများအနေဖြင့် က ပုဒ်မ(၁၄၄) အား မသိသလိုနေ၍ ညဘက်တွင် သွားလာလှုပ်ရှားမှုများရှိနေပြီး ကားလမ်းပေါ်တွင် အများဆုံး သွားလာကာ နွား၊ ဆိတ်များကို ကားလမ်းပေါ်တွင်လွှတ် ကျောင်းမှုများရှိခဲ့ပြီး ကားလာလျှင် နွားကို ခဲဖြင့် ပေါက်သလိုနှင့် ကားကို ပစ်ပေါက်မှုများရှိခဲ့သည်ဟု ဒေသခံ အချို့က ဆိုသည်။
“ည (၇) နာရီကနေ မနက် (၆) နာရီအထိ မထွက်ရဟု ထုတ်ပြန်ထားတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဘက်က ဥပ ဒေကို လိုက်နာလို့ မထွက်ရဲဘူး သူတို့မီးလာရှို့ရင်လည်း ခံရဦးမယ်။ အိမ်ပေါ်က ဆင်းပြန်ရန်လည်း ညမထွက်ရဆိုပြီး သေနတ်နဲ့ အပစ်ခံရဦးမယ်”ဟု ဒေသခံ တစ်ဦးက ပြောသည်။
မင်းပြားမြို့တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ပြဿနာမှာ OIC ကိုလက်မခံသည့် ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲကြောင့် မွတ်ဆ လင်လူမျိုးများက သူတို့ဆီကို လာမည့်အကူအညီများမရနိုင်တော့သည့်အတွက် မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်ကာ ကြိုတင်ကြံစည် လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး အခင်းမဖြစ်ပွားမီ ပိတ်သေရွာတွင် မွတ်ဆလင်လူမျိုးများက မိန်းမနှင့် ကလေးများကို တခြားရွာသို့ ပို့ဆောင်ပြီး အသင့်ပြင်ဆင်ထားသည်ဟု သိရသည်။
အောက်တိုဘာလ (၂၅) ရက်နေ့က မင်းပြားမြို့ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှုးရုံးတွင် မင်းပြားမြို့ တပ်နယ်မှူး ဒုတိယ ဗိုလ်မှုးကြီး ခင်မောင်ညွန့်က ဦးစီးပြီး မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှုး ဦးအောင်ကျော်နှင့် မြို့နယ် ပြည် ခိုင်ဖြိုးအဖွဲ့ဝင် များ မြို့နယ်ရပ်မိရပ်ဖ များနှင့် တွေ့ဆုံကာ မင်းပြားမြို့ တည်ငြိမ် အေးချမ်းရေး အစည်းအဝေးပြုလုပ်ကာ ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟု အဆိုပါပွဲသို့ တက်ရောက်ခဲ့သူမြို့နယ် ပြည်ခိုင်ဖြိုး အတွင်းရေးမှုး ကိုအောင်စိုးသန်းမှ ပြောသည်။
“ကျွန်တော်တို့ မြို့မိမြို့ဖတွေကလည်း မင်းပြားမြို့က ဆရာတော်တွေရဲ့ သြ၀ါဒခံယူပြီး ဒေသခံတွေကို ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းနေထိုင်ကြဖို့ စီမံဆောင်ရွက်နေပါတယ်”ဟု မြို့မိမြို့ဖတစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးစံမင်းက ပြောသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း လူသားခြင်းစာနာထောက်ထားသည့် အကူအညီများ ပေးအပ်သွားရန် ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင် ငံတော်အစိုးရအဖွဲ့ နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဋ္ဌာန နှင့် အစ္စလာမ်မစ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ (OIC)တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် မှုစာချွန်လွှာ (MOU)ကို စက်တင်ဘာ လ(၁၁)ရက်နေ့က နေပြည်တော်ရှိ နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဋ္ဌာန ၀န်ကြီးရုံး၌ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ သော် လည်း မြန်မာနိုင်ငံ၌ (OIC)ရုံးဖွင့်လှစ်ရန်ကိစ္စမှာ ပြည်သူ့ဆန္ဒနှင့် မကိုက်ညီသဖြင့် ခွင့်ပြုမည် မဟုတ် ကြောင်း အောက်တိုဘာ(၁၅)ရက်နေ့က နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးမှ သိရှိရသည်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 10/27/20120အကြံပြုခြင်း
by Myanmartandawsint Newspaper on Thursday, October 25, 2012 at 7:33pm
ရန်ကုန် အောက်တိုဘာ ၂၃
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့သော ပဋိပက္ခအခြေအနေနှင့် စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံတော်သမ္မတထံသို့ သုံးသပ်ချက်အစီရင်ခံစာအား နိုဝင်ဘာ ၁၄ တွင် အချိန်မီတင်နိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်းကို ရခိုင် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များက မြန်မာသံတော်ဆင့်သို့ ပြောကြားခဲ့သည်။
ကော်မရှင်အဖွဲ့သည် နိုင်ငံတော်သမ္မတက ချမှတ်ပေးထားသည့် လုပ်ငန်းစဉ် ၈ ရပ်နှင့်အညီ စုံစမ်း စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ပြီး နိုဝင်ဘာ ၁၄ ရက်တွင် သုံးသပ်ချက် အစီရင်ခံစာကို တင်ပြရမည်ဖြစ်သည်။
““ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်း သဘောထားပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ အဆင်မပြေဘူး။ မပြီးလောက်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ သမ္မတချမှတ်ထားတဲ့ တာဝန် ၈ ခုစလုံး မပြီးသေးတဲ့အတွက် တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် ခွဲတင်သွား မယ်။ နောက်ဆုံးအချောသတ် အစီရင်ခံစာကို နိုဝင်ဘာ ၁၄ မှာ မပြီးနိုင်ဘူး။ ဒီရက်ပိုင်းမှာတော့ အစပျိုး အစီရင်ခံစာ တင်နိုင်အောင် ကြိုးစားနေပါတယ်””ဟူ၍ ရခိုင်စုံ စမ်းရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးဇာဂနာက မြန်မာသံတော်ဆင့်သို့ဖြေကြားခဲ့သည်။
ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များသည် အလှည့်ကျသွားရောက်စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ရာ နှစ်ဖက်စလုံး၏ အခြေအနေတင်းမာမှုသည် အရင်အတိုင်း ပြန်လည်ရရှိရန် ခက်ခဲမှုရှိကြောင်း၊ ပြဿနာအကြောင်း အရင်း၏အဖြေကို ရှာတွေ့နေပြီ ဆိုသော်လည်း ကာယကံရှင်များ အပေါ်မှာသာမူတည်ကြောင်း၊ ရခိုင် အရေးသုံးသပ်ချက်အစီရင်ခံစာနှင့် ပတ်သက်၍လည်း ““နိုဝင်ဘာ ၁၄ မှာ အချိန်မီပြီး၊ မပြီးဆိုတာအဖွဲ့ ၀င်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ပြောဖို့ခက်တယ်။ လောလောဆယ်တော့ နောက်ဆုံးအဆင့်လိုက် မလုပ်ရ သေးပါဘူး””ဟူ၍ အဖွဲ့ဝင်ဒေါ်သန်းသန်းနုက ဖြေကြားခဲ့သည်။
ရခိုင်အရေးကိစ်္စများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးခင်မောင်ဆွေက ““နိုဝင်ဘာမှာ မပြီးနိုင်ဘူး။ အစီရင်ခံစာကြီး မတင်နိုင်ရင်တောင် ကြားဖြတ်အစီရင်ခံစာတော့ တင်နိုင်မှာပါ။ အခက် အခဲတော့ မတွေ့ရပေမယ့် နှစ်ဖက်က တွေ့ဆုံတဲ့အဆင့်ပဲရှိသေးတယ်။ ညှိနှိုင်းတဲ့အဆင့် မရောက်သေးဘူး””ဟူ၍ ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ သည်။
------------------------ နေပြည်တော်၊ အောက်တိုဘာ ၂၁
ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်အား မေးမြန်းလိုသော အသေးစိတ်အချက်အလက်များအား မေးမြန်းနိုင်ကြောင်းနှင့် မီဒီယာများအနေဖြင့် သမ္မတကြီးကို ပျော်ရွှင်အောင်ထားရန် အောက်တိုဘာ ၂၁ ရက်၊ မွန်းလွဲ ၁ နာရီ ၄၀ မိနစ်ခန့်တွင် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံတော်သမ္မတအိမ်တော်၌ ကျင်းပသော နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့် ပြည်တွင်းမီဒီယာများတွေ့ဆုံ ပွဲမစတင်မီ၌ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မင်းက တက်ရောက်လာသော မီဒီယာများအား ပြောကြားခဲ့သည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မင်းက ““အသေးစိတ်ကိစ္စတွေကျရင် ကျွန်တော်တို့ကို မေးလို့ရပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒီပွဲက ကျွန်တော်တို့ပွဲလည်း မဟုတ်ဘူး။ သမ္မတကြီးရဲ့ပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ သမ္မတကြီးက မဟာဗျူဟာပိုင်းတွေ သူပြောပြပါမယ်။ နည်းဗျူဟာပိုင်း အသေးစိတ်အချက်အလက်လေးတွေကျရင်တော့ ကျွန်တော်တို့၊ ဦးအောင်ကြည်၊ ဦးစိုးသိန်းတို့ကို ကြိုက်တဲ့အချိန် မေးလို့ရပါတယ်။ ဒီထဲမှာ မီဒီယာတွေကပြောတယ်။ ဒီလိုပွဲမျိုးကို တစ်လကိုတစ်ကြိမ်လောက် လုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။ ထပ်လုပ်ဖို့ရော အစီအစဉ်ရှိလားလို့ ကျွန်တော့်ကိုမေးတယ်။ သမ္မတကြီးကတော့ ပျော်ရင်လုပ်မှာပေါ့လို့၊ မပျော်ရင်တော့လည်း ဘယ်လုပ်မလဲလို့။ အဲဒီတော့ သမ္မတကြီးပျော်အောင် ခင်ဗျားတို့ လုပ်ပေးကြပေါ့ဗျာလို့ ကျွန်တော် အဲဒီလိုပဲပြောလိုက်ပါတယ်။ သမ္မတကြီးက ခင်ဗျားတို့ကို တလေးတစားနဲ့ ပြည်တွင်းမီဒီယာတွေကို လေးလေးစားစားထားပြီးတော့ တွေ့ပေးတဲ့ပွဲလို့ပဲ ခင်ဗျားတို့စိတ်ထဲမှာ သဘောထားပေးပါ။ ဒီထဲမှာ မဖြေလိုက်ရတဲ့ မေးခွန်းတွေ ဘာတွေရှိတယ်ဆိုလည်း ကျွန်တော်တို့ကို မေးရင်လည်း ကျွန်တော် တို့ ဖြေလို့ရပါတယ်။ သမ္မတကြီးက မဟာဗျူဟာပိုင်းကိုတော့ သူပြောသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီလိုပွဲမျိုးလေးက ပထမဦးဆုံးဖြစ်တယ်။ နောက်လည်း ဒီလိုပွဲမျိုးလေးတွေ ဖြစ်သွားအောင် ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပြီးတော့ ဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်။ အဲဒီတော့ ဒီမှာရှိတဲ့အဖွဲ့တွေအားလုံးက နားလည်ပေးဖို့တင်ပြအပ်ပါတယ်”” ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ ယင်းပွဲတွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးစိုးသိန်းနှင့် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်ကြည်တို့ တက်ရောက်ခဲ့သည်။
ရခိုင်အရေးကိစ္စဆွေးနွေးရန် ငွေကျပ် သိန်း ၆၀၀ ပေးခဲ့သည့်သတင်း မဟုတ်မှန်
ရန်ကုန်၊ အောက်တိုဘာ ၂၄
လွှတ်တော်တွင် ရခိုင်အရေး ကိစ္စဆွေးနွေးရန် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီပါတီသစ်က ရခိုင်ဘက်မှ ငွေကျပ် သိန်း ၆၀၀ ပေးခဲ့သည့် သတင်းမှာ မဟုတ်မှန်ကြောင်းကို အမျိုးသားဒီမိုကရေစီပါတီသစ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသိန်းညွန့်က မြန်မာသံတော်ဆင့်သို့ ပြောသည်။
ရခိုင်အရေးဖြစ်ပြီး ၁ ပတ် ၁၀ ရက်ကာလတွင် ရိုဟင်ဂျာ ၅ ယောက်က ရခိုင်ဒုက္ခသည်များကို ကူညီပံ့ပိုးရန် (NNDP) ရုံးသို့ ငွေကျပ်သိန်း ၆၀၀ ကျော် လက်ခံရန် လာပြောကြောင်း၊ NNDP ပါတီ အမည်ခံ၍ လှူဒါန်းမည့် ငွေကြေး ကုန်ကျစရိတ် သိန်း ၁၀၀၀ ကျော်လျှင်လည်း လှူပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် လေယာဉ်လက်မှတ် အသွားအပြန်ကုန်ကျစရိတ် အားလုံးကို ရိုဟင်ဂျာများမှ တာဝန်ယူမည်ဟု ပြောကြောင်း NNDP ပြန် ကြားရေးတာဝန်ခံက ပြောသည်။
““ဒီငွေတွေကို ငါတို့ပါတီအနေနဲ့ လက်ခံလို့မရဘူး။ ရခိုင်ဒေသမှာ လှူချင်ရင် အစိုးရထံကို သွားလှူလို့ ငြင်းလိုက်တယ်။ လွှတ်တော်မှာ ရခိုင်အရေးကိစ္စဆွေးနွေးတာကလည်း ရခိုင်လူမျိုးတွေအတွက် ဆွေးနွေးခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ ပြည်ထောင်စုကြီးအတွက် ဆွေးနွေးခဲ့တာ၊ လွှတ်တော်မှာ တင်ပြခဲ့တဲ့သမိုင်း၊ အထောက်အထားတွေက ရခိုင်ဘက်က ပေးလာတဲ့ အထောက်အထားကိုလည်း အခြေမခံဘူး။ ရိုဟင်ဂျာ တွေက ပေးလာတဲ့ အချက်အလက် တွေကိုလည်း အခြေမခံဘူး။ သမိုင်းသုတေသီတွေက ပေးလာတဲ့ အချက်အလက်တွေကို လွှတ်တော်မှာ တင်ပြခဲ့တာဟု NNDP ဥက္ကဋ္ဌဦးသိန်းညွန့်က ပြောသည်။
““သူတို့လှည့်ကွက်ထဲလည်း မ၀င်ရော ရုံးကို နေ့ရောညပါ တယ်လီဖုန်းနဲ့ ခြိမ်းခြောက်တယ်။ ကမ်းလှမ်းချက်မရရင် NNDP ရုံးရှေ့မှာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်သပိတ်မှောက်မယ်လို့ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ခြိမ်းခြောက်တယ်။ သိပ်မကြာဘူး၊ ရုံးကို စာတိုက်ကနေ (သို့ ဦးသိန်းညွန့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီပါတီသစ် သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်) လို့ လိပ်မူပြီး ခြိမ်းခြောက်စာတစ်စောင် ရောက်လာတယ်””ဟု ၎င်းက ထပ်မံ ပြောသည်။
ထိုစာ၏ဇာစ်မြစ်၊ ခြိမ်းခြောက် သည့် ဖုန်းနံပါတ်များကို ဖော်ထုတ်ရန်အတွက် အစိုးရနှင့်သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်တွင် တာဝန်ရှိကြောင်း ၁၉၈၂ ခုနှစ် အမျိုးသားနိုင်ငံသား ဥပဒေကို ဖျက်သိမ်းရန်မလိုကြောင်းနှင့် ထိုဥပဒေကို အမျိုးသားရေး တာဝန်တစ်ရပ်အနေဖြင့် ကာကွယ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကဆက် လက်ပြောသည်။
ဘင်္ဂလီအချင်းအချင်း သဘောထားမတူသဖြင့် ကျောက်ဖြူနှင့် ပေါက်တောမြို့နယ်များမှ ဘင်္ဂလီများကို စစ်တွေမြို့နယ်မှ ဘင်္ဂလီများလက် မခံ လိုက်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။
ယင်းအတွက် အဆိုပါဘင်္ဂလီများသည် ယခုအခါတွင် မောင်တောမြို့မြောက်ပိုင်း ၊ တောင်ပြိုမြို့နယ်ခွဲတွင် နေရာချထားခွင့်ရရှိမည် ဟု သိရှိရကြောင်း၊ လက်ရှိတွင် ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရမှ ဘင်္ဂလီများနှင့် ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်နေကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
27.10.2012 ရက်နေ့ ကျောက်တော်မြို့သတင်း
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကျောက်တော်မြို့တွင် ယခု လက်ရှိသတင်းအရ အလောင်း နောက်ထပ်(၂) လောင်းကို ထပ်မံ တွေ့ရှိရသည်ဟု သိရှိရပြီး ယခုအခါ သေဆုံးသူ စုစုပေါင်းမှာ (၈) ယောက်ရှိသွားပြီးဖြစ်ပါသည်။ ဒဏ်ရာ ရသူများမှာ ကျောက်တော်မြို့ ပြည်သူ့ ဆေးရုံနှင့် စစ်တွေမြို့ ပြည်သူ့ ဆေးရုံသို့ သယ်ယူလာသော လူနာပေါင်း (၁၄) ယောက်ရှိသည်ဟု သိရှိရပါသည်။ ယခုအခါ တချို့အတည်မပြုနိုင်သော သတင်းအရ လူအချို့ပျောက်ဆုံးလျှက်ရှိသည်ဟု သိရှိရပါသည်။
27-10-12 ၃း၄၅ အချိန်သတင်း
ရခိုင်ပြည်နယ်၏ ယနေ့အခြေအနေမှာ အေးချမ်းနေကြောင်းသိရသည်။ သို့သော်လည်း မောင်တောမြို့နယ် အတွင်းကျေးလက်ဒေသအချို့မှ မိသားစု အချို့သည် စစ်တွေမြို့နှင့်အခြားမြို့များသို့ ပြောင်းရွှေ့သွားနေသည်များ လည်း ရှိကြောင်းနှင့် ဒေသလုံခြုံမှုအတွက် စိုးရိမ်သဖြင့် နေရပ်စွန်ခွာသူများ အနည်းငယ် ရှိနေကြောင်းသိရှိရပါသည်။
ယင်းသို့ နေရပ်စွန့်ခွါသူအရေအတွက် များပြားလာမည်ကို ဒေသခံများက စိုးရိမ် လျက်ရှိကြောင်းနှင့် အခြားမြို့နယ်များတွင် လည်း ဘင်္ဂလီရွာများနှင့် လွန် စွာနီးစပ်သည့် အထားတွင်ရှိနေသော ရွာများမှာ သက်ကြီးရွယ်အို၊ကလေး၊ ဒုက္ခိတများအား ရွှေ့ပြောင်းထားမှုများကိုလည်း သိ ရှိရကြောင်း ဘူးသီးတောင်မြို့နှင့် မောင်တောမြို့နယ်များမှ RSV သို့ ယနေ့ ညနေပိုင်းတွင်ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
Tun Naing Soe
မင်းပြား၊ မြောက်ဦးတွင် မီးဘေး ဒုက္ခသည်နှင့် နေအိမ်စွန့်ခွာသူ(၃၀၀၀)ခန့်ရှိ
... အောက်တိုဘလအတွင်း မြောက်ဦး-မင်းပြားတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည် ဆူပူအကြမ်းဖက်မှုများကြောင့် ယခုအခါတွင် မီးဘေးဒုက္ခသည်နှင့် နေအိမ်စွန့်
ခွာထွက်ပြေးသူပေါင်း (၃၀၀၀)ခန့်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ပိုးဖြူကျွန်း၊ ကျောက်တန်းကုန်း၊ ပရိန်ကုန်း၊ မြရိပ်ကျွန်း စသည့်ကျေးရွာများမှ ဒေသခံ
များသည် ပန်းမြောင်း၊ ဂုံးချွန်၊ ဆင်အုပ်ကြီး၊ ဆင်အုပ်ချေ၊ စေတီကုန်း၊ လီညှင်းတောင် စတဲ့ ကျေးရွာစုစုပေါင်း (၁၀)ရွာသို့ ထွက်ပြေးခိုလှုံ နေကြပြီး လူဦးရေ (၂၅၀၀)ခန့်ရှိ
မည်ဟု မြောက်ဦးမြို့ ဒုက္ခသည်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့မှ ပြောသည်။
"အခုမြောက်ဦးမြို့ပေါ်မှာ ရတနာ့မာရ်အောင်ကျောင်း၊ အလိုတော်ပြည့်
ကျောင်း၊ လက်ကောက်ဈေးကျောင်းနဲ့ စန္ဒမုနိကျောင်းတွေမှာ မီးဘေးဒုက္ခသည်နဲ့ နေ့အိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးလာသူ(၅၀၀)ကျော်ရှိပါတယ်။
မြောက်ဦးမြို့ပေါ်ကိုလာဖို့ ခက်ခဲသွားခဲ့တဲ့ လူပေါင်း (၂၅၀၀)လောက်ဟာ အဲဒီကျေးရွာ(၁၀)ရွာမှာ ရောက်ရှိနေပါတယ်။ ထွက်ပြေးလာခဲ့တဲ့ ကျေးရွာက(၅)ရွာပါ။
တစ်ရွာမှာ အိမ်ခြေ(၁၀၀)နဲ့ (၂၀၀)ကြားမှာရှိပါတယ်။"ဟု ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများတိုး
တက်ရေးပါတီမှ အတွင်းရေးမှူး ဦးခိုင်ပြည်စိုးက ပြောသည်။
ယင်းကျေးရွာ(၁၀)ရွာသို့ ရောက်ရှိသွားသည့် ဒုက္ခသည်များကို မြောက်ဦးမြို့သို့
ခေါ်ဆောင်ရန် ရဟန်းသင်္ဃာများနှင့် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများမှ ကြိုးပမ်းလျှက်ရှိပြီး
ဒုက္ခသည်များ စားဝတ်နေရေးအတွက် မြောက်ဦးမြို့ခံများမှ တာဝန်ယူဖြေရှင်းပေး
"အဲဒီရွာတွေကိုရောက်သွားတဲ့လူတွေကို မြောက်ဦးမြို့ကိုခေါ်မှဖြစ်မယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ရွာတွေအကုန်လုံးက ဆင်းရဲတော့ လူပေါင်း (၂၅၀၀)ကို ဘယ်လိုလုပ် ကူညီနိုင်မလဲ။ ကျနော်တို့ဆီကနေပြီး အဲဒီရွာတွေကို ရိက္ခာတွေသွားပို့ဖို့ကလည်း ကြားမှာ ဘင်္ဂလီရွာတွေ
ခံနေပြီး လမ်းခရီးကမကောင်းတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး။
ဒါကြောင့် ကျနော်တို့ သက်ဆိုင်အာဏာပိုင်တွေနဲ့ ညှိနှိုင်းပြီး သူတို့ကို ဒီမြောက်ဦးမြို့ထဲကို ခေါ်ယူသွားရမှာပါ။ လိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေကိုလည်း ကျနော်တို့ ရခိုင်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်တွေကို အကူညီတောင်းထားပါတယ်။
"ဟု ဦးခိုင်ပြည်စိုးက ဆက်ပြောသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်ဖြူမြို့နယ်၊မင်းပြားမြို့နယ်၊ မြေပုံမြို့နယ်နှင့် မြောက်ဦးမြို့နယ်
များတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့်ဆူပူအကြမ်းဖက်မှုများကြောင့် အောက်တိုဘာလ(၂၄)ရက်နေ့ထိ
သေဆုံးသူ(၁၂)ဦး၊ ဒဏ်ရာရရှိသူ(၅၀)ဦး၊ လူနေအိမ်(၁၉၄၈)အိမ်၊ ဘာသာရေး
အဆောက်အဦး(၈)ခု မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ပြီး လူအများအပြား အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရသည်
ဟု နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး သတင်းထုတ်ပြန်ချက်(၁/၂၀၁၂)တွင် ဖော်ပြထားသည်။
By : Arakan Times
ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် မှ ရခိုင်ပြည်တွင်ဖြစ်ပွားနေသည့် ပဋိပက္ခနှင့်ပတ်သတ်ပြီး ကြေငြာချက်ထုတ်ပြန်
KNU ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်များ ပြေလည်မှု ရရှိ
KNU ခေါင်းဆောင် များ ကြားအကွဲ ပြဲ ပြသနာကို ဗဟိုကော်မတီ အစည်းဝေး တွင် ပြေလည်မှု ရရှိ ပြီဖြစ်ကြောင်း KNU ဗဟိုကော်မတီက အောက်တိုဘာ ၂၇ ရက်နေ့ ရွက်စွဲဖြင့် အရေးပေါ် ကြေညာချက်တစ်ရပ် ထုတ်ပြန်ကြေညာသည်။
အောက် တိုဘာ ၂၅ ရက် နေ့ နှင့် ၂၆ ရက် နေ့တွင် ကျင်းပသောအဆိုပါ ဗဟိုကော်မတီ အစည်းဝေးတွင် စက်တင်ဘာလ ၂၇ ရက်နေ့ ကထုတ်ပယ် ခဲ့သောခေါင်းဆောင် ၃ ဦးကို၁၄ ကြိမ်မြောက် ညီလာခံက တာဝန်ပေး အပ်ထားသည့် ရာထူးများအတိုင်း ၁၅ကြိမ် မြောက် ညီလာခံထိ တာဝန် ဆက်လက်ပေးရန် သဘောတူညီ မှု ရရှိခဲ့ကြောင်း KNU ဗဟိုကော်မတီ ၀င်တစ်ဦးက ဆိုသည်။
စက်တင်ဘာ လ ၂၇ ရက်နေ့ ကပြုလုပ်သော KNU ဗဟိုကော်မတီ အစည်းဝေး တွင် KNU /KNLA စစ်ဦးစီးချုပ် မှုးတူးစေးဖိုး ၊ဗဟိုတရားရေး တာဝန်ခံ ပဒိုဒေးဗစ် ထော နှင့် ကယ်ဆယ်ရေးဌာန တာဝန်ခံ ဖဒိုစောရော်ဂျာခင်တို့ အား စည်းကမ်းချိုးဖောက် သည်ဟုဆိုကာတာဝန်မှ ရပ်ဆဲလိုက်ခြင်းကြောင့် KNLAတပ်မဟာအချို့ တွင် သဘောထား ကွဲလွဲမှုများဆက် တိုက်ပေါ် ပေါက် လာဖြင်း ဖြစ်သည် ။
အဆိုပါ ထုတ်ပယ်ခံရသော KNU ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေးအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှုးဗဟိုတရားရေး တာဝန်ခံ ဖဒိုဒေးဗစ်ထောမှာအောက်တိုဘာ ၁၄ ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ မင်္ဂဒုံစစ်ဆေးရုံတွင် အဆုတ် ရောဂါ ဖြင့် ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။ယင်းဗဟိုကော်မတီ အထူးအစည်းဝေး သို့ KNU ဗဟိုအမြဲတမ်းကော်မတီ နှင့် ဗဟိုအရန် ကော်မတီ ၄၀ ဦးခန့် တက်ရောက် ခဲ့ကြသည်။
KNU ဗဟိုအမြဲတမ်းကော်မတီ အထူးအရေးပေါ် အစည်းအဝေး သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်
အောက်တိုဘာ ၂၅ ရက်ရခိုင်ပြည်နယ်အိမ်ခြေ ၃၈၅ လုံး မီးလောင် ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီး ၁ဝ ဦး သေဆုံး
Yangon Media Group ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်တော်၊ ရသေ့တောင်၊ ကျောက်ဖြူနှင့် ပေါက်တောတို့ ၌ ဆူပူ အကြမ်းဖက် မီးရှို့မှု ဖြစ်စဉ်များ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့
ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်တော်၊ ရသေ့တောင်၊ ကျောက်ဖြူနှင့် ပေါက်တော မြို့နယ်တို့၌ အောက်တိုဘာ ၂၅ ရက် တွင် လူစု လူဝေးများက မီးရှို့ ဖျက်ဆီးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သဖြင့် အိမ်ခြေ ၃၈၅ လုံး မီးလောင် ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီး ၁ဝ ဦး သေဆုံးကာ ကိုးဦး ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
ကျောက်တော်မြို့နယ် လက်ဆောင်ကောက်ကျေးရွာ၌ နနံက်၅ နာရီခွဲ ခန့်တွင် လူစုလူဝေးများက မီးရှိုခဲ့သဖြင့် အိမ်ခြေ ၁၈ လုံး မီးလောင်ဆုံးရှုံးခဲ့၍ ခြောက်ဦးသေဆုံးကာ လေးဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး ၎င်းလူစုလူဝေးမှ စွန်ပစ်ခဲ့သည့် ဒေသလုပ် တူမီးသေနတ် ၄၁ လက်အား သိမ်းဆည်း ရမိခဲ့သည်။
ထို့အတူ ရသေ့တောင်မြို့နယ် ညောင်ပင်ကြီးကျေးရွာ၌ နံနက် ၇ နာရီ ၄၅ မိနစ်ခန့်တွင် လူစုလူဝေးများက မီးရှို့ ဖျက်ဆီးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သဖြင့် အိမ်ခြေ ၃ဝ ခန့် မီးလောင်ဆုံးရှုံးပြီး နှစ်ဦးသေဆုံးကာ လေးဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။
အလားတူ ကျောက်ဖြူမြို့ အနောက်ပိုင်းရပ်ကွက်၊ သန်ပန်ချောင်း ရပ်ကွက်နှင့် တောင်ရင်းကျေးရွာအုပ်စု တိုးချဲ့ရပ်ကွက်တို့၌ နံနက် ၁၁ နာရီခန့်တွင် ဆိုင်များဖျက်ဆီးခြင်း၊ လူအုပ်စုဖြင့် အကြမ်းဖက်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့သဖြင့် နှစ်ဦးသေဆုံးပြီး တစ်ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။
ထို့ပြင် ပေါက်တောမြို့ အရှေ့ပိုင်းရပ်ကွက်၌ မွန်းလွဲ ၂ နာရီခန့်တွင် လူစုလူဝေးများက လူနေအိမ်များအား မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့သဖြင့် အိမ်ခြေ ၁၅၃ လုံးနှင့် အဆောက်အအုံတစ်လုံး မီးလောင်ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီး ပေါက်တောမြို့ ဘဝမ်းချောင်းဝစု ရပ်ကွက်အား လူစုလူဝေးများက မီးရှို့ခဲ့သဖြင့် အိမ်ခြေ ၁၈၃ လုံးနှင့် အဆောက်အအုံတစ်လုံး မီးလောင်ဆုံးရှုံးခဲ့သည်။
အောက်တိုဘာ ၂၁ ရက်မှ ၂၅ရက်အထိ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဆူပူအကြမ်းဖက် မှုများကြောင့် မြောက်ဦး၊ မင်းပြား၊ မြေပုံ၊ ကျောက်ဖြူ၊ ကျောက်တော်၊ ရသေ့တောင်နှင့် ပေါက်တော မြို့တို့၌ စုစုပေါင်းသေဆုံးသူ ၆၇ ဦး၊ ဒဏ်ရာရရှိသူ ၉၅ ဦးရှိပြီး အိမ်ခြေ ၂၈၁၈ လုံး၊ ဘာသာရေး အဆောက်အအုံ ၁၈ လုံး မီးလောင်ပျက်စီး ဆုံးရှုံးခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
အဆိုပါဖြစ်စဉ်နေရာများသို့ ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့နှင့် ဒေသတွင်း တာဝန်ရှိသူများက သွားရောက်ပြီး ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်း များနှင် ပြန်လည်နေရာ ချထားရေး လုပ်ငန်းများ၊ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး၊ ပြန်လည်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနှင့် ပဋိပက္ခများထပ်မံ မဖြစ်ပွားစေရေး တို့အတွက် အရေးယူ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ (သတင်းစဉ်)
source: : http://www.ministryofinformation.gov.mm/index.php/news/local-news/1183-2012-10-27-06-01-59.html
ရွာသူတွေကို နှုတ်ခမ်းပေါက်တဲ့ အကြမ်းဖက် ၀င်ရောက် ထိုးနှက်
စစ်ကိုင်းတိုင်း၊မုံရွာခရိုင်၊ ဆားလင်းကြီးမြို့နယ်၊ လက်ပံ တောင်းတောင်စီမံကိန်းဒေသ ဆည်တည်းရွာနှင့် ကျော်ရွာနှစ်ရွာအား အချိန်ကိုက် တစ်ပြိုင်နက် လယ်ယာမြေများပေါ်တွင် စွန့်ပစ်မြေများပုံသည်ကို လယ်သမားများမှာ ရွာအလိုက် နှစ်ဖက်ခွဲ တားဆီးနေစဉ် လာရောက်ပုံသော တရုတ်လူမျိုးနှစ်ဦးအား ရွာသူရွာသားများမှ ခေါ်ယူထားပြီး ကုမ္ပဏီမှ လာရောက်ဖြေရှင်းပေးလျှင် ပြန်လွှတ် မည်ဖြစ်ကြောင်းပြောခဲ့သည်။သို့သော်ယခုအလုံထိန်းဝန်ထမ်း တွေက ရွာသူတွေကို နှုတ်ခမ်းပေါက်တဲ့ အကြမ်းဖက် ၀င်ရောက် ထိုးနှက်၍ တရုတ်များအား ခေါ်ဆောင် သွားသဖြင့် ရွာသူတစ်ဦး နှုတ်ခမ်းပေါက်ပြဲဒဏ်ရာနှင့်ကျန်ခဲ့ပြီး စွန့်ပစ်မြေများ မပုံရန် ငိုယိုတောင်းပန်နေကြောင်းသိရသည်။
၀၉၄၀၀၄၀၈၂၃၆ ဗထူးမှတဆင့် ရွာသူရွာသား များအား မေးမြန်းနိင်ပါသည်။
တရားမမျှတတဲ့ ဥပဒေအရတော့ ခေါင်းဆောင်လုပ်ချင်စိတ် မရှိသင့်
“(ပြည်သူ)အားလုံး မျှမျှတတအခြေခံပေါ်ကနေ (ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကို) ရွေးချယ်နိုင်အောင်လို့ နောက်သက်တမ်းမှာ (ထပ်မံ)အရွေးချယ်ခံချင်တဲ့ မည်သူမဆို ကြိုးစားပေးစေချင်တယ်။ အကုန်ပြင်ရမှာပဲ။ ဒီဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကြီးက တရားမျှတမှုမှမရှိတာ။ တရားမမျှတတဲ့ ဥပဒေအရတော့ ခေါင်းဆောင်လုပ်ချင်စိတ် မရှိသင့်ဘူးလို့ မြင်တယ်။ တကယ် ဒီမိုကရေစီလိုလားတဲ့သူတိုင်း ဒီမိုကရေစီနဲ့မကိုက်ညီတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲက ပုဒ်မတွေကို ပြင်ဆင်ဖို့ဆိုတာ ကိုယ့်တာဝန်ပဲလို့ မှတ်ယူရပါမယ်။ နောက်ပြီးတော့ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးက (ညောင်နှစ်ပင်မှာ) ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေညီလာခံ(ကျင်းပခဲ့စဉ်တုန်းက) ဥက္ကဋ္ဌလုပ်ခဲ့တာ မဟုတ်ဘူးလား” ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောကြား (24-10-2012)
မီဒီယာသမားများသို့မေတ္တာရပ်ခံခြင်း
၁- ယခုအချိန်တွင် ရခိုင်ပြည်ဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ ကျွန်တော်က ပြည်ထောင်စု
မြန်မာနိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်အား တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို
ရှေးရှူပြီး ဥပဒေနှင့်အညီ တိကျစွာ အမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်ပေးပါရန် သမ္မတ
ဦးသိန်းစိန်ထံသို့အိတ်ဖွင့်ပေးစာ တစောင်ကို ပေးပို့ ခဲ့ ပါသည် ။ သို
ဦးတည်ပြီး ငြိမ်းချမ်းစေရေးအတွက် မေတ္တာရပ်ခံစာ တစောင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ ပါသည်
၂ - ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ သမ္မတရုံးမှလည်း ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီး
နောက်ကွယ်က ကြိုးကိုင်သူများနှင့် လှုံ့ ဆော်ဖန်တီးသူ လူများ -အဖွဲ
့အစည်းများကို ဥပဒေအရ ထိရောက်စွာ အရေးယူမည်ဖြစ်ကြောင်း
၃- သို့ ဖြစ်ပါ၍ ရခိုင်ပြည်နယ် ဖြစ်စဉ်များနှင့် ပါတ်သက်ပြီး
ပဋိပက္ခများကို ဆက်လက်ဖြစ်ပွါးစေအောင် အသံများဖြင့် လွှင့်ထုတ်နေသော
မြန်မာပိုင်းအသံလွှင့်ဋ္ဌာနများ ၊ ဂျာနယ်-စာစောင်- ၀ပ်ဆိုက်များမှ
ရေးသားနေကြသော ဗုဒ္ဒဘာသာ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအား
လူမျိုးနှစ်မျိုးအကြား ပို၍သွေးချောင်းစီး ပြသနာများအောင် တို့ မီးရို
့မီး မပြုလုပ်ကြပါရန် အထူးမေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်
-RFA- မှ စက်လှေနှင့်ထွက်ပြေးသူ ကျောက်ဖြူမှ မွတ်ဆလင်လူမျိုးက
သူကိုယ်တိုင် မွတ်ဆလင်လူမျိုးအနှေင့် အကြိမ်ကြိမ်ပြောနေသည်ကို
သတင်းထောက်မှ အင်တာဗျူးနေသည့်တိုင် လူမျိုးရေးပဋိပက္ခကို
ဆက်လက်ဖြစ်ပွါးစေအောင် သွေးချောင်းစီးစေမည့် အရေးအသားမျိုးကို ရေးသား
ထုတ်လွှင့်နေသည်ကို တွေ့ မြင်နေရပါသည် ။
၄- ယခုအချိန်မှာ ပြသနာများကို ဆက်လက်မဖြစ်ပွါးအောင် ထိမ်းသိမ်းပြီး
သွေးချောင်းစီးခြင်း ၊ နေအိမ်များ မီးရို့ ခြင်းကို မပြုလုပ်ကြပါရန်
မေတ္တာရပ်ခံနေကြရာ ယခုလို အရေးအသားများ ၊ အသံလွှင့်နေခြင်းများအား နောင်ကို
မပြုလုပ်ကြပါရန် အထူးမေတ္တာရပ်ခံ သတိပေးလိုက်ပါသည် ။။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 10/25/20120အကြံပြုခြင်း
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ပြန်လည်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေ ရပ်ဆိုင်းရေး ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများအဖွဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 10/25/2012 1 အကြံပြုခြင်း
ရှစ်လေးလုံး သမိုင်းအခြေခံ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ရိုက်ကူးမည်
ရှစ်လေးလုံး သမိုင်းမှတ်တမ်း အခြေခံ ရိုက်ကူးမည့် ''ချွန်စေမြ စေစော'' ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို လာမည့်နှစ်တွင် ရိုက်ကူးနိုင်ရန် ပြင် ဆင်နေပြီဟု နိုင်ငံရေးအကျဉ်း သားဟောင်းများအဖွဲ့ချုပ်မှ ကိုညို ထွန်း (ဒါရိုက်တာ သျှိုညိုထွန်းသိမ်း) က ပြောသည်။
အဆိုပါ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကို ဒါရိုက်တာ သျှိုညိုထွန်းသိမ်းက ရိုက်ကူးသွားမည်ဖြစ်ပြီး ငြိမ်းချမ်း ရေးနှင့် မိဘ သ
ားသမီး မေတ္တာ အကြောင်း ကျောရိုးထား၍ ၁၉၈၇ ခုနှစ်မှ ၈၈ ခုနှစ်အတွင်း မဆလ တစ်ပါတီခေတ်၏ အားနည်းချက် ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသောအခြေ အနေများကို ဇောင်းပေးရိုက်ကူး သွားမည်ဟု သိရသည်။
''သရက်ထောင်မှာ ကျနေ တုန်း ဖရိန်ရခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းကို လွန်ခဲ့တဲ့ ခြောက်လလောက်က စရေး ဖြစ်တာပါ။ နယ်ကနေ ဆေး ကျောင်းလာတက်တဲ့ ကျောင်းသား တစ်ယောက် အကြောင်းပါ'' ဟု ကိုညိုထွန်းက ပြောသည်။
ဇာတ်ကားရိုက်ကူးနိုင်ရေး အတွက် အနုပညာအကြံပေးအဖွဲ့၊ ဇာတ်ညွှန်း အကြံပေးအဖွဲ့၊ သမိုင်းနှင့် ဝတ်ဆင်ရေးအကြံပေး အဖွဲ့၊ သရုပ်ဆောင် ရွေးချယ်ရေး အဖွဲ့၊ သတင်းထုတ်ပြန်ရေး အဖွဲ့၊ ဆက်တင်အကြံပေးအဖွဲ့၊ တည်း ဖြတ်အကြံပေးအဖွဲ့ ဟူ၍
အဖွဲ့ ၇ ဖွဲ့ခွဲကာ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ ကြောင်း ၄င်းက ပြောသည်။
ယင်းဇာတ်ကားကြီးတွင် ဇာတ်ညွှန်းခွဲ တာဝန်ယူထားသော စာရေးဆရာ မျိုးကိုမျိုးက ''၈၈ မှာ တကယ် ဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့တဲ့သူတွေ၊ သမိုင်းပညာရှင်တွေရဲ့ အကြံဥာဏ် တွေ ယူပြီး တော်တော်လေး ကြိုး စားပြင်ဆင်နေပါတယ်။ မြန်မာ့ သမိုင်းမှာ အရမ်းအရေးကြီးတဲ့ အချိန်ဖြစ်ခဲ့လို့ပါ'' ဟု ပြော သည်။
သမိုင်းမှတ်တမ်း ဇာတ်ကား ဖြစ်သည့်အတွက် အမှားအယွင်း မဖြစ်စေရန် ရှုတင်မန်နေဂျာ သုံး ဦးနှင့် မှတ်တမ်းသုံးဦးစီ ထားရှိသွား မည်ဟု ၄င်းက ဆက်လက်ပြော သည်။လက်ရှိတွင် ဇာတ်ညွှန်းနှင့် အခန်းစဉ်များ စတင် ရေးသားနေ ပြီဖြစ်ပြီး ယင်းဇာတ်ကားတွင် လက်ရှိ သရုပ်ဆောင်များ၊ သရုပ် ဆောင်သစ်များ အပြင် ၈၈ တွင် ပါဝင် ဖြတ်သန်းခဲ့သော နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်းများ ကိုယ်တိုင် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ရန်လျာထား ကြောင်း အသေးစိတ် အချက် အလက်ကို သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရ သည်။
Vote for USA ????
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားမှုအခြေအနေနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အသိပေးကြေညာခြင်း(နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး)
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးမှ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားမှုအခြေအနေနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အသိပေးကြေညာချက် တစ်ရပ်ကို နိုင်ငံပိုင် ရုပ်မြင်သံကြားများတွင် ယနေ့ ည (၈)နာရီတွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါ ကြေညာချက်တွင် အချက် (၆)ချက် ပါဝင်ပြီး ကြေညာချက် အပြည့်အစုံမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။
သတင်းထုတ်ပြန်ချက် ( ၁ / ၂၀၁၂)
၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၂၅ ရက်
၁၃၇၄ ခု၊ သီတင်းကျွတ်လဆန်း ၁၀ ရက်
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားမှုအခြေအနေနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အသိပေးကြေညာခြင်း
၁။ ၂၀၁၂ ခုနှစ် မေလ နှင့် ဇွန်လ တို့တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ရာဇဝတ်မှုများကို အကြောင်းပြု၍ လူအုပ်စုအချင်းချင်း ဒေါသအလျောက် အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှု၊ မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ ဇွန်လ (၁၄)ရက်အထိ သေဆုံးသူ (၅၀)ဦး၊ ဒဏ်ရာရရှိသူ (၅၄)ဦးရှိခဲ့၍ လူနေအိမ် (၂၂၃၀)အိမ်နှင့် ဘာသာရေး အဆောက်အဦ (၁၄)ခု မီးလောင်ဆုံးရှုံး ခဲ့ပါသည်။ ဒေသခံပြည်သူ (၆၁၄၆၂)ဦး တို့သည် အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ ဖြစ်ကာ ဒုက္ခသည်စခန်းများသို့ ရောက်ခဲ့ကြရပါသည်။
၂။ အဆိုပါ ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနေခြင်းများနှင့်ပတ်သက်၍ အလျင်အမြန် အေးငြိမ်းသွားစေရန် ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရက မြို့နယ်အချို့တွင် ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ကျင့်ထုံးဥပဒေပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်ပြန်၍ လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတက ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ နှင့်အညီ ဥပဒေကဲ့သို့ အာဏာတည်သည့်အမိန့်ကို ထုတ်ပြန်ပြီး အရေးပေါ် အခြေအနေ ကြေညာ၍လည်းကောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် တပ်မတော်အပါအဝင် ဒေသခံပြည်သူများနှင့် ပူးပေါင်း၍ ဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် ရပ်ရွာတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး အတွက် ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သောကြောင့် အချိန်တိုအတွင်း တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကို ပြန်လည်ရရှိခဲ့ပါသည်။ အရေးပေါ်အခြေအနေ ထုတ်ပြန်ဆောင်ရွက်မှုကိုလည်း ဥပဒေနှင့် အညီ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၏ အတည်ပြုချက် ရယူ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
၃။ အထက်ပါဖြစ်စဉ်အပေါ် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းအချို့တို့မှ မြန်မာနိုင်ငံအား လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုအဖြစ် ပုံဖော်ပြီး ပြစ်တင်ဝေဖန်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည့်အပြင် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးသို့ပင် တင်ပြခဲ့ရာ၊ နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေဖြင့် အဆိုပါပြစ်တင်ဝေဖန်မှုများကို နည်းလမ်းမျိုးစုံဖြင့် ကြိုးပမ်းချေဖျက်ခဲ့ရပါသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ဒုက္ခသည်များအတွက် ယာယီနေရာချထားရေး၊ စားနပ်ရိက္ခာ ထောက်ပံ့ရေး၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ပြည့်စုံရေးနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတို့အတွက် လူသားချင်း စာနာထောက်ထားသည့် ထောက်ပံ့ကူညီမှုများရရှိအောင် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ရပါသည်။
၄။ ယခုအခါ ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်ဖြူမြို့နယ်၊ မင်းပြားမြို့နယ်၊ မြေပုံမြို့နယ်နှင့် မြောက်ဦး မြို့နယ် တို့တွင် မမျှော်လင့်ဘဲ ဆူပူအကြမ်းဖက်မှုများ ထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ရာ ၂၀၁၂ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ (၂၄)ရက်အထိ သေဆုံးသူ (၁၂)ဦး၊ ဒဏ်ရာရရှိသူ(၅၀)ဦး ရှိပြီး၊ လူနေအိမ် (၁၉၄၈)အိမ်၊ ဘာသာရေး အဆောက်အဦ (၈)ခု မီးလောင်ပျက်စီး ဆုံးရှုံးကာ လူအများအပြား အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရပါသည်။
၅။ လက်ရှိအခြေအနေသည် ဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင်သော ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကို အချိန်တို အတွင်း ညင်သာစွာ အသွင်ကူးပြောင်းနိုင်ခဲ့ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းမှ အသိအမှတ်ပြု ထောက်ခံလျက် ရှိသကဲ့သို့၊ ဆက်လက် တိုးတက်ဖြစ်ပေါ်လာမည့် အခြေအနေများကို စိတ်ဝင်စားစွာ စောင့်ကြည့်နေကြသည့် အချိန်ကာလ လည်း ဖြစ်ပါသည်၏
၆။ ဤသို့သောအခြေအနေတွင် တစ်ကျော့ပြန် ဖြစ်ပွားလာသော ဆူပူအကြမ်းဖက်မှုများသည် နိုင်ငံတော်၊ နိုင်ငံသားတို့၏ ဂုဏ်သိက္ခာနှင့်အကျိုးစီးပွားကို ထိခိုက်နစ်နာ စေနိုင်သဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့၊ တပ်မတော်နှင့် ဒေသခံပြည်သူများ၏ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် ဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် ရပ်ရွာတည်ငြိမ် အေးချမ်းရေးကို ထိထိရောက်ရောက် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ပြင် ရခိုင်ပြည်နယ် ပဋိပက္ခတွင် နောက်ကွယ်မှ ကြိုးကိုင်လှုပ်ရှားနေသော လူပုဂ္ဂိုလ်နှင့် အဖွဲ့အစည်းများလည်း ရှိနေကြောင်း သိရှိရသဖြင့် ၎င်းတို့ကိုဖော်ထုတ်၍ ဥပဒေနှင့်အညီ ထိရောက်စွာ အရေးယူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာအပ်ပါသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် ပဋိပက္ခ ဆက်လက် ကူးစက်(၂၅-၁၀-၂၀၁၂)
၂၅-၁၀-၂၀၁၂ နေ့မနက်၊ ၆း၃၀ သတင်း
ယနေ့မနက်တွင် ကျောက်တော်မြို့နယ်နှင့်အနီးတ၀ိုက်တွင် အခင်းတစ်စုံတရာဖြစ်ပွားနေ၍ ကားလမ်းကြောင်းများအား ပိတ်ထားလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ အဆိုပါကားလမ်းကြောင်းများပိတ်ထားလိုက်သည့်အတွက် ကျောက်တော်မြို့သို့ ခရီးဆက်နေသော ရွှေပြည်သား၊ တိုးရတနာ၊ ရိုးမသစ္စာကားတို့မှာ ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့တွင် ရပ်တန့်နေရကြောင်းသိရသည်။ အခင်းဖြစ်ပွားနေသည့်နေရာနှင့် အကြောင်းအရာကို ဆက်လက်စုံစမ်းနေပါသည်။
ရသေ့တောင်မြို့နယ် အနောက်ပြင်ကုလားရွာနှင့်ညောင်ပင်ကြီးကုလားရွာတို့မှ ခေါတောကုလားများ ကူတောင်ရခိုင်ရွာ ဦးဂါရခိုင်ရွာတှိုိရခိုင်များအားလာရောက်တိုက်ခိုက်နေကြောင်း ရွာချင်းထိစပ်နေသောထုရွာများတွင် ဘင်္ဂလီခေါတောများမှ ညောင်ပင်ကြီးကုလားရွာရှိမိမိတို့အိမ်များကို မီးရှို့ခြင်း ရခိုင်အိမ်များကို မီးကွင်းပစ်ခြင်းတို့ ကျောက်ဖြူမြို့တွင် အကြမ်းဖက်ခဲ့သည့်ပုံစံအတိုင်း ကျူးလွန်ရန်စရာ ရခိုင်ရွာနီးချုပ်စပ်မှ လိုက်ပါသွားနေကြကြောင်း ယနေ့ (25-10-2012)ရက် (7:07 AM)အချိန်တွင် ဖုန်းသတင်းရှိလာပါသည်။
(၂၅-၁၀-၂၀၁၂) ရက်နေ့ (၉း၃၀)မိနစ်၊ နံနက်
ကျောက်တော်မြို့နယ်တွင် ကုလားများအကြမ်းဖက်သောကြောင့် ဒေသခံများနှင့် စတင်ဖြစ်ပွါးကြောင်းသတင်းကြားပြီး မကြာမှီပင် သ၀င်ကိုင်းကျေးရွာမှ ဦးထွန်းအောင်သာ ၊ အသက်(၃၀)ကျော်တစ်ဦးလည်း အဓိကရုန်းတွင် ကျဆုံးသွားခဲ့ရကြောင်း၊ ဒဏ်ရာရသူများလည်းရှိကြောင်း ကျောက်တော်မြို့ဒေသခံများထံမှ ကြားသိရပါသည်။ သေဆုံး၊ ဒဏ်ရာရ စာရင်း တိတိကျကျနှင့် ရင်းမြစ်အပြည့်အစုံကို စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပါသည်။
(၂၅-၁၀-၂၀၁၂) ရက်နေ့ (၁၁း၂၃)နာရီ၊ နံနက်
ကျောက်ဖြူ၊ မြောက်ဦး၊ မင်းပြား တို့မှ ကုလားစက်လှေများ အလယ်ဖရုံကာကျွန်းရှိ ကြယ်နီပြင်ကုလားရွာနှင့် ဆင်တက်မော်ကုလားပိုက်ဆိပ်တို့၌ ကမ်းကပ်မှုများရှိနေကြောင်း ကြားသိရပါသည်။ အလယ်ဖရုံကာကျွန်းတစ်ရိုးရှိ အနောက်ရိပ်၊ တောင်ဦးမော်၊ ပိန္နဲချောင်း၊ မညင်းကိုင်း ရခိုင်ရွာများမှ သူတို့ရွာတန်းရှည်တစ်လျှောက် ကမ်းကပ်ခွင့်မရအောင် အမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်နေကြရသည်။
ရသော့တောင်မြို့နယ်၌ ဖြစ်ပွါးခဲ့သော နံနက်ပိုင်းအဓိကရုဏ်းတွင် ကျွန်းကြီးရွာမှ ဦးသိန်းလှမောင်၊ အဘဦးမောင်ငယ်၊ အသက်(၅၅)နှစ်တစ်ဦး ထပ်မံ၍ အခင်းဖြစ်ပွါးပြီးဒဏ်ရာကြောင့် သေဆုံးခဲ့ရကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
၁၁း၃၈ နာရီ ကျောက်တော် သတင်း
ကျောက်တော်မြို့ ရှိ ပိုက်သည်ရပ်အရေးအခင်းတွင် (၃) ယောက်ကျဆုံးပြီ ဒဏ်ရာ
အပြင်အထန်းရရှိမှုများ ရှိသည်ဟု သိရှိရပါသည်။
(၁)ထွန်အောင်သာ ၊ အသက် (၄၅)နှစ် ၊သ၀င်ကိုင်းကျေးရွာ။ စစ်တပ်မှ ဗိုလ်မအဆင့်ရှိသူမှ ပစ်စတိုဖြင့် ပစ်သတ်ဟု မျက်မြင်သက်သေကပြော။
(၂) ဦးကျော်သိန်း ၊ အသက် (၃၇)နှစ် ၊ ပြည်တော်သာ ရပ်ကွက်။
(၃) ဇော်ဝင်း၊ အသက် (၃၈)နှစ်၊ ပြည်တော်သာ ရပ်ကွက်။
၁၁း၄၅ နာရီ ရသေ့တောင် သတင်း
ရသေ့တောင်မြို့နယ်ရှိ ညောင်ပင်ကြီးကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ (၃၀) လောက်မီးလောင်းကျွမ်သွားပြီး (၂) ယောက်ကျဆုံးသွားပြီး အများအပြားဒဏ်ရာ ရရှိဟု သိရှိရပါသည်။
(၁)သိန်းလှမောင် ၊ ကျွန်းကြီးကျေးရွာ။ ရသေ့တောင်မြို့ ၊ ခလရ ၅၃၆ စစ်တပ်မှ ဗိုလ်ကြီး စောကြည်ထွန်း မှ သေနပ်ဖြင့် ရခိုင်များကို ပစ်သတ်ရာတွင် သေဆုံး။
(၂) အောင်ဇံဝေ ၊ ကပ်ချောင်းကျေးရွာ။ (အလောင်းမရသေး)
၁၂း၀၉ နာရီ သတင်း
ရသေ့တောင်မြို့နယ် ဂူတောင်ကျေးရွမှ ဒဏ်ရာ အပြင်အထန်ရရှိပြီး စစ်တွေမြို့ ပြည်သူ့ ဆေးရုံးသို့ (၃)ယောက်ရောက်ရှိလာ ကြောင်းသိရှိရပါသည်။
လူမရှိသောအိမ်များမီးလောင်မှုဖြစ်ပေါ်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့် ရှို့မီးကြောင့် လောင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
ပေါက်တောမြို့နယ်တွင် မီးလောင်နေသည်အား စစ်တွေမြို့မှ မြင်တွေ့ရပုံ
၃း၁၀ နာရီ ကျောက်တော်မြို့သတင်း
ကျောက်တော်မြို့တွင် ယခုအခါ အရေးအခင်းမှာ ငြိမ်းအေးသွားပြီးဖြစ်ကြောင်းနှင့် သေဆုံး ရခိုင်တိုင်းရင်း (၄) ယောက်ရှိကြောင်းကို RSV သတင်းထောက်မှ အတည့်ပြုပေးပါသည်။
၆း၂၀ နာရီ - ရသေ့တောင်၊ ညောင်ပင်ကြီးအရေးအခင်းတွင် စစ်တွေဆေးရုံသို့ ယခုထပ်မံရောက်ရှိလာသော ဒဏ်ရာရလူနာများ
၁။ ဦးလေယိုင်ထွန်း ( ၃၈ -နှစ်)
( ဘ) ဦးထွန်းယဉ်
၂။ ဦးအေးထွန်းသောင်း ( ၄၇ - နှစ် )
( ဘ) ဦးစိုးထွန်းအောင်
၃။ ဦးမောင်စိန်လှ ( ၄၆ - နှစ်)
( ဘ) ဦးလပြည့်အောင်
၄။ ဦးသိန်းရွှေ ( ၄၇ - နှစ်)
( ဘ) ဦးစံသာလှ
လက်ဖျံ နှင့် မျက်စေ့ ကျည်ထိဒဏ်ရာ
အထက်ပါလူနာလေးဦးအပါအ၀င် ယနေ့ရသေ့တောင်မှ ရောက်ရှိလသော လူနာစုပေါင်း ၉ ဦး စစ်တွေဆေးရုံတွင် ဆေးကုသခံလျက်ရှိပါသည်...။
Ref: ၀ံလက်ဖောင်ဒေးရှင်းမှ ထုတ်သော စာရင်းကို ကူးယူးဖော်ပြပါသည်။
၃း၂၆ နာရီ ရသေ့တောင်မြို့ သတင်း
မောင်တောမြို့ နယ်၊ ဥဒေါင်းကျေးရွာမှ ဦးရွှေဂျော်အောင်ဦးဆောင်သော လူ ၂၀ ပါ အဖွဲ့ တစ်ဖွဲ့သည် RSO အကြမ်းဖက်သမားများ ၀င်ရောက်မည့်သတင်းကြောင့် ရသေ့တောင်မြို့ သို့ လာရောက်ခိုလှုံလာသည်ဟု သိရှိရပါသည်။
၈း၅၂ နာရီ သတင်း
ကျောက်ဖြူမြို့ ၊ ၊ပေါက်တောမြို့တို့ မှ ထွက်ပြေးလာသော စက်လှေအစီး ၅၀ ကျော်ရှိ ရခိုင်ပြည်သို့ ကျူးကျော်၊ ခိုးဝင်လာကြသော ဘင်္ဂလီကုလားများအား သူတို့၏ မိခင်တိုင်းပြည်ဖြစ်သော ဘင်္ဂလားဒေရှ့် မှ ယာယီ လက်ခံမည်ဟု ကမ်းလှမ်းထားကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
Ref: Aung Mra Kyaw
ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာသော ဘင်္ဂလီကုလားများ မောင်တော်မြို့နယ်ကျောက်ပန်းတူရွာတွင်ခိုလှုံ
ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း ရခိုင်ပြည်နယ်အနှံဖြစ်ပွားခဲ့သောအရေးအခင်းတွင် ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာခဲ့ကြသော ဘင်္ဂလီကုလားဦးရေ (၂၀၀)ထက်မနည်းသူတို့သည် ယနေ့တွင် ကျောက်ပန်းတူ ရွာတွင်ခိုလှုံနေကြောင်းသိရပါသည်။
အဆိုပါဘင်္ဂလီများသည် ပင်လယ်ရေကြောင်းခရီးဖြင့် ထွက်ခွာလာပြီး ကျောက်ပန်းတူရွာသို့ ကမ်းတက်ခွင့်အား သက်ဆိုင်ရာမှခွင့်ပြုသဖြင့် ခိုလှုံနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ မနက်ဖြန်တွင် မောင်တောမြို့၊ သက်ဆိုင်ရာဌာနများမှ အဆိုပါထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခိုလှုံရန်ရောက်ရှိလာကြသူများအတွက် ယာယီရွက်ဖျင်တဲများဆောက်လုပ်ရန်အတွက်စီစဉ်ထားရှိပြီးဖြစ်ကြောင်း မောင်တောမြို့မှ မြို့ခံသားတစ်ဦးကပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ကျောက်ပန်းတူရွာသို့ သွားရောက်ရန် အတွက်ကားများကို ကြိုတင်စီစဉ်ထားပြီဟုလည်း ကားငှားရမ်းခြင်းခံထားရသည့် ကားမောင်းဆရာတစ်ဦးမှပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ကျောက်ပန်းတူရွာသည် မောင်တောမြို့မြောက်ဘက်ပိုင်း အလယ်သံကျော် အလွန်တွင်တည်ရှိပါသည်။
ယမန်နေ့ညနေပိုင်းတွင်ဖော်ပြခဲ့သော မောင်တောမြို့နယ်အတွင်း ကုလားများ ပွဲတော်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် မနက်လင်းအာရုဏ်တွင် သံချောင်းတီးခတ်မည့် အစီအစဉ်အား လုံခြုံရေးအခြေအနေအရ မပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ကျောက်ဖြူမြို့အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှ ဘင်္ဂလီများအား သက်ဆိုင်ရာမှ လုံခြုံရေးအပြည့်ဖြင့် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှုများပေးအပ်
ယခုလတ်တလောဖြစ်ပွားခဲ့သော အရေးအခင်းပဋိပခများကြောင်း ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာသော ဘင်္ဂလီများကို ကျောက်ဖြူမြို့ ကျောက်တစ်လုံးဘုရားအနီး ဆားကွင်းတွင် သက်ဆိုင်ရာ၏ စီစဉ်ပေးမှုဖြင့် လုံခြုံရေးအပြည့်ထားရှိပေးကာ ကောင်းမွန်စွာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးနေပြီဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ယခု ယာယီခိုလှုံခွင့်ပေးထားသည့် ဆားကွင်းတွင် မည်သည့်အချိန်ကာလထိ နေထိုင်ခွင့်ပေးမည်ကိုမသိရှိရသေးကြောင်းစုံစမ်းသိရှိရပါသည်။
၂၅-၁၀-၂၀၁၂ နေ့လည်က လောင်ကျွမ်းခဲ့သော ပေါက်တောမြို့နယ်၊ ဘ၀မ်းကျေးရွာ
photo credit : Sein Down (Facebook)
ကျောက်ဖြူမြို့မှ သတင်းထောက်တစ်ဦး၏ ကင်မရာ memory ကဒ်အားကျောက်ဖြူခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ ယနေ့ ၂၅ ရက်နေ့ ၊နေ့လည် ၁
နာရီခန့်အချိန်တွင် သိမ်းဆည်းသွားခဲ့ကြောင်း မျက်မြင်သက်သေများကပြောဆိုပါသည်။
ကျောက်ဖြူမြို့တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သော မီးလောင်မှုများနှင့်ပတ်သက်ပြီး EMGမှသတင်းထောက်သည် အချိန်နှင့် တစ်ပြေးညီ သတင်းများကို
ဂျာနယ်တိုက်သို့အရောက်ပို့ပေးခဲ့ကြောင်းလည်းသိရသည်။ ဂျာနယ်တိုက်မှ တရားဝင်ခန့်ထားသော သတင်းထောက်တစ်ဦး၏ ဓါတ်ပုံရိုက်ခွင့်ကို ပိတ်ပင်ခြင်း၊နှောက်ယှက်ခြင်းများသည် ဂျာနယ် လွတ်လပ်ခွင့်များအား ပိတ်ပင်တားဆီးနေသည်ဟု
တွေးမြင်ခံစားမိပါသည်။ယင်းသို့ လုပ်ရပ်များသည် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ဂျာနယ်လစ်များပေါ်ထွက်လာရေးကို တားဆီးပိတ်ပင်နေ သကဲ့သို့ သက်ရောက်စေသည့်ပြင် အခြားသောသတင်းသမားများအားလည်း ခြိမ်းခြောက်ခြင်းများဖြစ်နေ ကြောင်း
သိရှိရပါသဖြင့် RSV အနေဖြင့် ထိုလုပ်ရပ်အား ကန့်ကွက်ပါကြောင်းတင်ပြအပ်ပါသည်။
ထိုသတင်းထောက်သည် EMG မှကျောက်ဖြူတာဝန်ခံသတင်းထောက် ဦးရဲမင်းနိုင်ဖြစ်ပြီး ကင်မရာ memory ကဒ်အား သိမ်းဆည်းသွားသူမှာကျောက်ဖြူခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကြောင်းလည်း ကဒ်သိမ်းယူသွားစဉ် မြင်တွေ့လိုက်ရသူများက
ပြောပါသည်။မီဒီယာသမားများအား ထိုသို့ ပြုလုပ်ခြင်းသည် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှအခြားသော မီဒီယာသမားများအ တွက် လည်းစိုးရိမ်စရာဖြစ်လာနိုင်ကြောင်းလည်းသုံးသပ်မိပါသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်သတင်း ပြည့်စုံစွာ သိရှိရေး
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မြောက်ဦးမြို့နယ်၊ မင်းပြားမြို့နယ်၊ မြေပုံမြို့နယ်နှင့် ကျောက်ဖြူမြို့နယ်တို့တွင် ဖြစ်ပွားလျက် ရှိသော မတည်မငြိမ်မှုများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သတင်းအချက်အလက်များအား ပြည့်စုံစွာ ထုတ်ပြန်သွားမည် ဖြစ်သလို ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရ တာဝန်ရှိသူများအားလည်း သတင်းမီဒီယာများအား သတင်းအချက်အလက်များ ပြည့်စုံစွာ ရှင်းလင်းဖြေကြားပေးရန် ညွှန်ကြားထားကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
(ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော် သမ္မတရုံး၊ အကြီးတန်းအရာရှိကြီး တစ်ဦး၏ Facebook စာမျက်နှာမှ)
ref ; Popular Myanmar News Journal
<span style="color: #0000ee;"><u></u><br />
<span style="color: #0000ee;"><u><br /></u>ရခိုင်လူမှုရေး အသင်း<br />3 hours ago<br />ခင်ဦးသာ| October 25, 2012 |
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဖြစ်ပွားနေသော ပဋိပက္ခသည် ယနေ့တွင် ကျောက်တော်၊ ပေါက်တောနှင့် ရသေ့တောင်မြို့နယ်များသို့ ကူးစက်ပြန့်နှံ့သွားပြီး ပဋိပက္ခများအတွင်း စစ်တပ်မှ ပစ်ခတ် လူစုခွဲရာ သေဆုံးမှုတချို့ရှိပြီး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူ အများအပြား ရှိကြောင်း သိရသည်။ရခိုင်ပြည်တွင်းရှိ ဒေသခံ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများနှင့် မွတ်စလင်တို့အကြား ဖြစ်ပွားနေသည့် ပဋိပက္ခသည် ယခုအခါ ရခိုင်ပြည်နယ်တခုလုံးနီးပါး ကူးစက်ပြန်နှံ့နေကြောင်း၊ နှစ်ဖက်အကြား အပြန်အလှန် တိုက်ခိုက်မှု၊ မီးရှို့မှုများ ဖြစ်ပွားကာ လူသေဆုံးမှု၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုလည်း အများအပြားရှိကြောင်း၊ လူနေအိမ် ထောင်ချီ၍ မီးလောင်ကျွမ်းသွားသည့်အတွက် နှစ်ဘက်စလုံး၌ ဒုက္ခသည် ထောင်ချီရှိကြောင်း ဒေသခံများက ပြောသည်။ရခိုင်ဒေသတွင်း ပဋိပက္ခများကြောင့် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများနှင့် မွတ်စလင်တို့အကြား အပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်၍ သေဆုံးခြင်း၊ စစ်တပ်မှ ပစ်ခတ်လူစုခွဲရာတွင် သေနတ်ထိမှန် သေဆုံးခြင်းနှင့် ထိခိုက် ဒဏ်ရာရသူ အများအပြား နှစ်ဖက်စလုံးတွင် ရှိကြောင်း သိရသော်လည်း အရေအတွက်ကို ဧရာဝတီက အတည်ပြုနိုင်ခြင်း မရှိသေးပေ။ရသေ့တောင်မြို့နယ်၊ ညောင်ပင်ကြီး ကျေးရွာ၌ ဖြစ်ပွားသော ပဋိပက္ခကို ထိုဒေသ၌ အခြေစိုက်ထားသည့် ခြေမြန်တပ်ရင်း (၅၃၆) မှ ပစ်ခတ် လူစုခွဲရာ၌ ဦးအောင်ဇံဝေနှင့် ဦးသိန်းလှမောင်တို့ သေနတ် ဒဏ်ရာဖြင့် သေဆုံးသွားပြီး ၈ ဦး ဒဏ်ရာရ ရှိသွားကြောင်း၊ မွတ်စလင်များဘက်တွင်လည်း သေဆုံးမှု၊ ထိခိုက်မှုရှိကြောင်း ဒေသခံများက ပြောသည်။ထို့အတူ ကျောက်တော်မြို့နယ်၊ ပိုက်သည်ကျေးရွာ၌ ယနေ့ နံနက်တွင် ဖြစ်ပွားသည့် ပဋိပက္ခကိုလည်း စစ်တပ်က ပစ်ခတ် လူစုခွဲရာ ဦးကျော်သိန်း၊ ဦးဇော်ဝင်း၊ ဦးထွန်းအောင်သာ တို့ ၃ ဦး သေဆုံးသွားကာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရသူများကို စစ်တွေ ဆေးရုံကြီးသို့ ပို့ဆောင်ရန် စီစဉ်နေကြောင်း သိရသည်။ပဋိပက္ခများ ပြန့်ပွားလာခြင်းသည် မမျှော်လင့်ဘဲ ဖြစ်ပွားလာရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ ပဋိပက္ခများ ဆက်လက် မပြန့်ပွားရေးအတွက် ပြည်နယ်အစိုးရက အလေးထား ဆောင်ရွက်နေကြောင်း၊ သို့သော် စစ်တပ်အင်အား ထပ်မံတိုးချပေးရန် မရှိကြောင်း၊ စစ်တပ် တိုးချပါက နိုင်ငံတကာမှ ပြောဆိုလာမည်ဖြစ်ကြောင်း ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့၏ ပြန်ကြားရေးတာဝန် ခံ ဦးဝင်းမြိုင်က ဧရာဝတီကို ပြောသည်။“ရခိုင်မှာ ရှိတဲ့စစ်တပ်တွေနဲ့ပဲ ထိန်းပေးဖို့၊ လုံခြုံရေး တာဝန်ယူပေးသွားမှာပါ။ ပြည်ထောင်စုအစိုးရ အကူအညီနဲ့ တခြားဒေသက စစ်တပ်တွေကို ထပ်မံ ခေါ်ယူဖို့ အစီအစဉ် မရှိပါဘူး၊ စစ်တပ်ကိုလည်း ပစ်မိန့် ပေးထားတာ မရှိဘူး” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။သို့သော် ရခိုင်ဒေသတွင်း ကြီးထွားလာသည့် ပဋိပက္ခများ၊ အကြမ်းဖက်မှုများကြောင့် ဒေသတွင်းရှိ စစ်တပ်နှင့် လုံထိန်း တပ်ဖွဲ့ဝင်များကို ပဋိပက္ခဖြစ်ရာ ဒေသများ၌ အင်အားတိုး ချပေးနေကာ အခြေအနေပေါ် မူတည်၍ ဥပဒေအရ လုပ်ဆောင်သွားရန် စစ်တပ်ကို တာဝန်ပေးထားကြောင်းလည်း ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့က ဆိုထားသည်။ရခိုင်ဒေသတွင်း ပဋိပက္ခ ကြီးထွားလာရခြင်းသည် ဗဟိုအစိုးရနှင့် ဒေသဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်တို့၏ အချိန်မီ ထိန်းသိမ်းမှု မရှိခြင်း၊ တာဝန်ယူမှု အားနည်းခြင်းကြောင့်ဟု ဒေသခံများက ဆိုသည်။ လက်ရှိ ပဋိပက္ခကို တာဝန်ယူ ထိန်းသိမ်းပေးနေသည့် စစ်တပ်သည်လည်း လိုအပ်သည်ထက် ပိုမိုပစ်ခတ်မှုကြောင့် လူသေဆုံးမှု၊ ဒဏ်ရာရသူ အများအပြား ရှိကြောင်းလည်း ဒေသခံတို့က ဆိုသည်။>ပြည်နယ်အစိုးရ ပြောခွင့်ရသူ ဦးဝင်းမြိုင်ကမူ စစ်တပ်ပစ်မှုကြောင့် သေဆုံးသူစာရင်း ၎င်းတို့ထံ မရောက်သေးကြောင်း၊ သို့သော် လူစုခွဲရာ၌ မတော်တဆ ထိခိုက်သေဆုံးမှု ရှိနိုင်ကြောင်း ပြောဆိုသည်။မင်းပြားမြို့နယ်၌ အောက်တိုဘာလ ၂၂ ရက်နေ့က စတင်ခဲ့သော ပဋိပက္ခသည် မြောက်ဦး၊ ကျောက်ဖြူ၊ မြေပုံ၊ ရသေ့တောင်၊ ကျောက်တော် စသည့်မြို့များအထိ ပြန့်နှံ့ ဖြစ်ပွားနေကာ နေအိမ်များ မီးလောင်ကျွမ်းသွားသည့် မြို့နယ်အားလုံးတွင် ဒုက္ခသည်များ ရှိနေသည့်အတွက် အရေးပေါ်အကူအညီများ လိုအပ်နေကြောင်း ဒေသခံများက ပြောသည်။အလားတူ မွတ်စလင်များနှင့် နီးစပ်သည့် ရခိုင်နှင့်တခြား တိုင်းရင်းသား ကျေးရွာများကလည်း မြို့ပေါ်ရှိ ဘုန်းကြီးကျောင်းများတွင် လာရောက် ခိုလှုံနေကြကြောင်း သိရသည်။ ထို့အတူ နေအိမ် မီးလောင်သွားသည့် မွတ်စလင်များကလည်း မွတ်စလင် ဦးရေများပြားသည့် ကျေးရွာများသို့ ပြောင်းရွှေ့ခြင်း၊ ထွက်ပြေးခြင်း၊ ကျောက်ဖြူ မြို့မှ မွတ်စလင်များသည်လည်း စက်လှေများဖြင့် စစ်တွေဒေသသို့ ပြောင်းရွှေ့သွားကြောင်း ကျောက်ဖြူမြို့ခံများက ပြောသည်။>ကျောက်ဖြူ ပဋိပက္ခကြောင့် ထိုဒေသမှ မွတ်စလင်များသည် စက်လှေစီးရေ ၄၀ ၀န်းကျင်ဖြင့် စစ်တွေမြို့ သဲချောင်းကျေးရွာသို့ ယမန်နေ့က ရောက်ရှိလာကြောင်း၊ တချို့သောသူများသည် ပုဏ္ဏားကျွန်း ဒေသသို့ ရောက်ရှိနေကြောင်း စစ်တွေမြို့ခံများက ပြောသည်။မီးဘေးဒုက္ခသည် အရေအတွက်ကို မြို့နယ်အလိုက် စိစစ်နေဆဲ ဖြစ်ကြောင်း၊ ဒုက္ခသည်များကို နေရာချထားပေးရေးနှင့်စားသောက်ရန် ရိက္ခာများကို မြို့နယ်အလိုက် ပေးဆောင်သွားမည်ကြောင်း ရိက္ခာ အလုံလောက်ရှိကြောင်း ဦးဝင်းမြိုင်က ဆိုသည်။>မြောက်ဦးမြို့နှင့် မင်းပြားမြို့နယ်တို့တွင် အောက်တိုဘာ ၂၁ နှင့်၂၃ တို့တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ပဋိပက္ခတွင်လည်း အမျိုးသားတဦးနှင့် အမျိုးသမီးတဦး သေဆုံးကာ အိမ်ခြေစုစုပေါင်း ၁၀၃၉ အိမ် မီးလောင်ဆုံးရှုံးသွားကြောင်း အစိုးရ သတင်းစာများက ရေးသားထားသည်။>ကျောက်ဖြူမြို့တွင်လည်း အောက်တိုဘာလ ၂၃ ရက်နေ့တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ပဋိပက္ခကြောင့် အိမ်ခြေ ၇၀၀ ကျော် မီးလောင်သွားပြီး၊ လူတဦး သေဆုံး၍ လူ ၂၀ ကျော် ဒဏ်ရာရကြောင်း ယနေ့ထုတ် အစိုးရ သတင်းစာများက ရေးသားထားသည်။
ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်းက ပေါက်တောရှိ ကျေးရွာတရွာ မီးလောင်မှု မြင်ကွင်း (ဓာတ်ပုံ – Thi Ha / Facebook)
ရသေ့တောင် ညောင်ပင်ကြီးရွာပဋိပက္ခ (၂)ဦးသေဆုံး (၁၀)ဦးနှင့်အထက်ဒဏ်ရာရရှိ
Written by မင်းသွီး Thursday, 25 October 2012 12:57
Rathadaung Patientအောက်တိုဘာလ(၂၅)ရက် ယနေ့ နံနက်(၉)နာရီခန့်က ရသေ့တောင်မြို့နယ် ညောင်ပင်ကြီးကျေးရွာပဋိပက္ခတွင် ရခိုင် (၂)ဦးသေဆုံးပြီး (၁၀)ကျော်ခန့် ဒဏ်ရာရှိခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ညောင်ပင်ကြီးကျေးရွာ၌ ဘင်္ဂလီအင်အား တစ်ထောင်ကျော်နှင့် ဒေသခံရခိုင်(၅၀၀)ကျော်ခန့်ဖြင့် ပဋိပက္ခဖြစ်ပေါ်နေချိန်တွင် စစ်တပ်အင်အား (၁၀)ဦးခန့်မှ သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်ဖြေရှင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
သေဆုံးသူနှစ်ဦးသည် ညောင်ပင်ကြီးကျေးရွာတွင်ပင် သေဆုံးခဲ့ရပြီး၊ ဒဏ်ရာရရှိသူများအား စစ်တွေဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်သွားကြောင်း သိရှိရသည်။
“ အခုကျနော်တို့ စစ်တွေကိုရောက်နေပါပြီ၊ အခုစစ်တွေဆေးရုံမှာ အတွင်းလူနာ (၃)ဦးနဲ့ အပြင်လူနာ (၇)ဦးရှိပါပြီ ” ဟု ရသေ့တောင်မှ စစ်တွေသို့ လူနာပို့ဆောင်လာသူတစ်ဦးမှပြောသည်။
ဒဏ်ရာရရှိသူများမှာ ကိုသန်းထွန်း အသက်-၂၆၊ အဘ-ဦးကျော်သန်းစိန် ဖြူချောင်းကျေးရွာ၊ ပေါင်ပေါ် သေနတ်ဒဏ်ရာရ၊ ဦးဘသန်း အသက်-၅၃၊ အဘ-ဦးအေးမောင် ကပ်ချောင်းကျေးရွာ၊ တင်သားတွင် သေနတ်ဒဏ်ရာရ၊ ဦးမောင်ကျော်ထွန်း အသက်-၅၅၊ အဘဦးမောင်ဖြူကြီး ကပ်ချောင်းကျေးရွာ၊ ပေါင်ပေါ်တွင် သေနတ်ဒဏ်ရာရ၊ ဦးအောင်ဇံဝေ အသက်-၄၈ ကပ်ချောင်းကျေးရွာ၊ ဦးသိန်းလှမောင် အသက်-၅၂၊ ဦးသိန်းကျော် အသက် - ၁၇၊ ဘ-ဦးလှထွန်းစိန် ဆားပြင်ကြီးကျေးရွာ လက်ဖံတွင် ယမ်းထောင်းသေနတ်ဒဏ်ရာရ၊ ဦးဖြူသိန်းမောင် အသက်-၃၅နှစ်၊ ဦးစန္ဒာအောင် လက်ခလယ်တွင် သေနတ်ဒဏ်ရာရ၊ ဆားပြင်ကြီးကျေးရွာတို့ ဖြစ်ကြပြီး ကျန်လူများကို ဆက်လက်စုံစမ်းလျှက်ရှိသည်။
ဦးအောင်မင်း ဦးဆောင်တဲ့ အဖွဲ့နဲ့ ဦးဆွမ်လွတ်ဂန် ဥ...
ဗဟိုစည် ဆေးရုံ မှားယွင်း ကုသသည်ဟု ဆိုကာ သမ္မတ ထံတို...
OIC အား တုံ့ပြန်မှုများကြောင့် မင်းပြားပြသာနာ စတင်ြ...
အောက်တိုဘာ ၂၅ ရက်ရခိုင်ပြည်နယ်အိမ်ခြေ ၃၈၅ လုံး မီး...
ရွာသူတွေကို နှုတ်ခမ်းပေါက်တဲ့ အကြမ်းဖက် ၀င်ရောက် ထိ...
တရားမမျှတတဲ့ ဥပဒေအရတော့ ခေါင်းဆောင်လုပ်ချင်စိတ် မရ...
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ပြန်လည်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ အကြမ်းဖက်မှုေ...